February 2010 | " မနာပဒါယီ "
။ အချိန် 2/27/2010 09:58:00 AM
အများဖြစ်နေကျ ပုံစံများ၊ အရာများထက် ပိုမိုလွန်ကဲပြီး အဖြစ်များတတ်တဲ့ သဘောကို စရိုက်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပါဠိစရိတဆိုတဲ့ စကားလုံးကို စရိုက်လို့ မြန်မာမှု ပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစရိုက်ကိုပဲ အထုံဝါသနာလို့ ဆိုပါတယ်။ လူတွေမှာ စိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုး အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေတာဟာ ဒီဘ၀နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်နေတာ မဟုတ်ဘဲ ရှေးရှေးဘ၀က အထုံဝါသနာနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ရှေးရှေးအတိတ်ဘ၀များက အထုံဝါသနာကောင်း ပါလာတဲ့သူတွေဟာ စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်း ရှိတတ်ပြီး အထုံဝါသနာဆိုး ပါလာတဲ့ သူတွေကတော့ စိတ်စေတနာ ဆိုးတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမကောင်းတဲ့ ၀ါသနာအထုံ စရိုက်တွေအားကောင်းတဲ့ သူတွေအတွက် စိတ်ကောင်းရှိအောင် ပြုပြင်ဖို့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ အထုံဝါသနာက အားကြီးနေလို့ပါ။
လောကမှာ လူအမျိုးမျိုး စရိုက်အမျိုးမျိုး ရှိကြတယ်လို့ ဆိုကြပေမယ့် ဗုဒ္ဓစာပေနဲ့ ခွဲခြားကြည့်လိုက်ရင် စရိုက် (၆)မျိုးပဲ ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်း မတူညီတဲ့ စရိုက်တစ်မျိုးစီ ဒါမှမဟုတ် နှစ်မျိုး၊ သုံးမျိုးစသည် ရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဘာစရိုက်အားကြီးတယ် ဆိုတာကိုတော့ ဒီစရိုက်ခြောက်ပါးနဲ့ ညှိကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စရိုက်ခြောက်ပါးမှာ ရာဂစရိုက်ရှိသူနဲ့ သဒ္ဓါစရိုက်ရှိသူဟာ သွားလာနေထိုင်၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်ပုံချင်း တူညီတတ်ပြီး ဒေါသစရိုက်ရှိသူနဲ့ ဗုဒ္ဓိ(ပညာ) စရိုက်ရှိသူဟာလည်း အနေအထိုင် အပြောအဆို အစားအသောက် တူညီတတ်ကာ မောဟစရိုက်ရှိသူနဲ့ ၀ိတက်စရိုက် ရှိသူမှာလည်း အလုပ်အကိုင် အပြောအဆို အစားအသောက်မှအစ တူညီနေတတ်တာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ရာဂစရိုက်ရှိသူနဲ့ သဒ္ဓါစရိုက်ရှိသူ နှစ်ဦးလုံးဟာ အသွားအလာ အနေအထိုင် အပြောအဆို ယဉ်ကျေးတတ်၊ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် နေတတ်ထိုင်တတ် လုပ်ကိုင်တတ်၊ အနံ့အသက်ကောင်းကောင်း အစားအသောက် ကောင်းကောင်းနဲ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုများကို နှစ်သက်တတ်ပါတယ်။ ထူးခြားမှုက ရာဂစရိုက်ရှိသူဟာ ကာမဂုဏ်အာရုံများကို မခွဲနိုင်မခွါရက်အောင် စွဲမက်တတ်၊ ပရိယာယ်မာယာများတတ်၊ စဉ်းလဲကောက်ကျစ်တတ်၊ လောဘမာန အားကြီးတတ်ပြီး သဒ္ဓါစရိုက် အားကြီးသူကတော့ ပရိယာယ်မာယာနှင့် လောဘမာနများ အလွန်မကြီးမားဘဲ စွန့်ကြဲပေးကမ်း လှူဒါန်းမှုမှာ ပျော်မွေ့တတ်၊ ဘုရားကျောင်းကန်များတွင် ၀တ်တွားဆည်းကပ်တတ်၊ ရတနာသုံးပါးအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှု အားကောင်းတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ သဒ္ဓါစရိုက်အားကြီးပြီး ပညာအားနည်းတဲ့အတွက် အလွဲကိုးကွယ်မိတာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
ဒေါသစရိုက်ရှိသူနဲ့ ဗုဒ္ဓိခေါ် ပညာစရိုက်ရှိသူ နှစ်ဦးလုံးဟာ အသွားအလာ အနေအထိုင် အပြောအဆို ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းတတ်၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ် နေထိုင်လုပ်ကိုင်မှု မရှိဘဲ ဖြစ်သလို ဖရိုဖရဲ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်၊ အချဉ်အငန် အစပ်အခါး စတဲ့ စူးစူးရှရှ အရသာတွေမှာ နှစ်သက်တတ်၊ မကောင်းတဲ့အဆင်းအသံ စတာတွေနဲ့ တွေ့ကြုံတဲ့အခါ သည်းခံအောင်အည်း ချုပ်တည်းခြင်းမရှိဘဲ ချက်ချင်းဆဲဆို ငေါက်ငမ်းကာ စိတ်ကြမ်းစိတ်တို လွယ်တတ်ပါတယ်။ ကွဲပြားတာက ဒေါသစရိုက်ရှိသူဟာ ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း အာဃာတ၊ မနာလိုခြင်း ဣဿာ၊ ၀န်တိုခြင်း မစ္ဆရိယ၊ သူတစ်ပါးဂုဏ်ကို ဖျက်ဆီးလိုခြင်း မက္ခ၊ ဂုဏ်တူဂုဏ်ပြိုင်ပြုခြင်း ပဠာသ၊ အဆုံးအမခက်ခြင်း ဒုဗ္ဗစတရားများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိတတ်ပြီး ဗုဒ္ဓိစရိုက်ရှိသူကတော့ ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း၊ မနာလိုခြင်း၊ ၀န်တိုခြင်း စတဲ့တရားများမရှိဘဲ ဆိုဆုံးမလွယ်တတ်၊ စားသောက်ဖွယ်မှန်သမျှမှာ နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန် ပြုတတ်၊ နောင်သံသရာအတွက် သတိပညာဖြင့် ကောင်းစွာမြော်မြင်ကာ ပါရမီကုသိုလ်များကို ကြိုးစားပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။
မောဟစရိုက်ရှိသူနဲ့ ၀ိတက်စရိုက်ရှိသူ နှစ်ဦးလုံးရဲ့ သဘောလက္ခဏာဟာလည်း တူညီနေတတ်ပါတယ်။ အသွားအလာ၊ အပြောအဆို အနေအထိုင်က အစပေါ့။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားချက်က မောဟစရိုက်ရှိသူဟာ မေ့မေ့လျော့လျော့ ပေါ့ပေါ့ဆဆ ရှိတတ်၊ ကိစ္စအထွေထွေ ပွေလိမ်ရှုတ်ထွေးတတ်၊ အစားအသောက်မှာလည်း တစ်သမှတ်တည်းမရှိ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို နှစ်သက်တတ်၊ အကြောင်းအကျိုး အကောင်းအဆိုးကို ခွဲခြားသိမြင်မှု မရှိတတ်ဘဲ သူများချီးမွန်းရင် လိုက်ချီးမွန်းတတ်ကာ သူများကဲ့ရဲ့ရင်လည်း လိုက်ကဲ့ရဲ့တတ်၊ သတိပညာကင်းပြီး ထိုင်းမှိုင်းခြင်း ထိနမိဒ္ဓ၊ ပျံ့လွင့်ခြင်း ဥဒ္ဓစ္စတို့နှင့် အချိန်ကုန်တတ်ပြီး ၀ိတက်စရိုက် ရှိသူကတော့ ဟိုဟိုဒီဒီ ကိစ္စများများမှာ အကျိုးမပြီး အချည်းနှီးဖြစ်နေတတ်၊ စကားပေါကာ ကိစ္စမချောဘဲ မျောနေတတ်၊ ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းများမှာ အစွမ်းအစမရှိဘဲ ပျင်းရိနေတတ်၊ ကိုယ်လိုပေါ့ပေါ့တန်တန် လူများနဲ့ပျော်မွေ့ကာ ထွေရာလေးပါး အကြံများပြီး လူအားလူပိုသာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ သတ္တ၀ါများ ရှိတတ်တဲ့ အကျင့်စရိုက်ရဲ့ သဘောတရားအချို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်း စရိုက်တစ်ခုခုကတော့ အားကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့စရိုက်အားကောင်းနေတာ ရှိတတ်သလို မကောင်းတဲ့စရိုက် အားကောင်းနေတာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့စရိုက် အားကောင်းနေရင်လည်း ဒီစရိုက်ကို ဆက်လက်တိုးပွားအောင် ကြိုးစားဖို့ လိုအပ်သလို မကောင်းတဲ့စရိုက် အားကောင်းနေရင်လည်း တတ်နိုင်သမျှ ပြုပြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ မကောင်းတဲ့အရာတွေမှာ ပျော်မွေ့တတ်တဲ့ ၀ါသနာစရိုက်ဟာ ကိလေသာများရဲ့ အားအစွမ်းဖြစ်နေတတ်ပြီး ကောင်းတဲ့အရာတွေမှာ ပျော်မွေ့တတ်တဲ့ ၀ါသနာစရိုက်ကတော့ ကောင်းတဲ့အလို သမ္မာဆန္ဒဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့စရိုက်ကို မှန်ကန်တဲ့ နည်းနဲ့အသုံးချနိုင်ရင် နိဗ္ဗာန်အထိ ရောက်နိုင်သလို မကောင်းတဲ့ စရိုက်ကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ ပြုပြင်နိုင်လျှင် နောင်သံသရာအတွက် ဒီစရိုက်များ လိုက်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ မပြုပြင်ရင်တော့ ကောင်းတဲ့စရိုက်လည်း မကောင်းတဲ့ဘက် ပါသွားတတ်ပြီး မကောင်းတဲ့စရိုက်ကတော့ အပါယ်အထိလားကာ ဘ၀အဆက်ဆက် နိမ့်ကျမှု သက်သက်ကိုပဲ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်မှာ ဘယ်လိုစရိုက်မျိုး ရှိတယ်၊ ဘယ်လိုစရိုက် အားကောင်းတယ်ဆိုတာကို ဆင်ခြင်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ကြည့်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာတော့ စရိုက်တွေကို ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာဟာ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီစရိုက်ခြောက်ပါးနဲ့ တွဲစပ်ပွားများရမယ့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အဲဒီဖော်ပြချက်က..
၁။ ရာဂစရိုက်အားကြီးသူဟာ စက်ဆုတ်ဖွယ် အကောင်ပုတ်လို့ ရှုရတဲ့ အသုဘ ကမ္မဋ္ဌာန်း ၁၀ပါးနဲ့ ဆံပင်အမွေး ခြေသည်းလက်သည်း စတဲ့ ၃၂ကောဋ္ဌာသကို ရှုဆင်ခြင်ရတဲ့ ကာယဂတာသတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားများခြင်းဖြင့် ရာဂစရိုက်ကို ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းဆယ့်တစ်ပါးထဲက သင့်လျော်ရာ တစ်ပါးပါးကို ပွားများပါးများလာရင် ရာဂမီးကို ငြိမ်းအေးစေနိုင်ပါတယ်။
၂။ ဒေါသစရိုက် အားကြီးသူဟာ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ ကမ္မဋ္ဌာန်းများနဲ့ နီလကသိုဏ်း (အညိုရောင်အဆင်း)၊ ပီတကသိုဏ်း (ရွှေရောင်အဆင်း)၊ လောဟိတကသိုဏ်း (အနီရောင်အဆင်း)၊ သြဒါတကသိုဏ်း (အဖြူရောင်အဆင်း) ဆိုတဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်း ၈ပါးကို ပွားများခြင်းဖြင့် ဒေါသစရိုက်ကို ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းများဟာ သန့်ရှင်းကြည်လင်တဲ့အတွက် အာရုံပြုပွားများသူများကို စိတ်ရွှန်လန်းပြီး နူးညံ့မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါသစရိုက်အားကြီးတဲ့သူဟာ ဒီကမ္မဋ္ဌာန်း ဂပါးထဲက တစ်ပါးပါးကို ပွားများသင့်ပါတယ်။
၃/၄။ မောဟစရိုက်နဲ့ ၀ိတက်စရိုက်ရှိသူများဟာ အာနာပါနဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားများပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မောဟစရိုက်ရှိသူဟာ သံသယနဲ့ ပျံ့လွင့်ခြင်းတို့ အဖြစ်များတဲ့အတွက် အလွယ်တကူ စိတ်ပျံ့လွင့် တုန်လှုပ်တတ်ပြီး ၀ိတက်စရိုက်ရှိသူဟာလည်း စိတ်ကူးအကြံအစည် များတဲ့အတွက် စိတ်ပျံ့လွင့်လွယ်တတ်ပါတယ်။ အာနာပါနဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းဟာ ထွက်သက်ဝင်သက်တို့ကို အချက်ကျကျ လိုက်၍ ရှုမှတ်ပေးရတဲ့အတွက် တုန်လှုပ်ပျံ့လွင့်တဲ့စိတ်ကို ချုပ်ထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမောဟစရိုက်နဲ့ ၀ိတက်စရိုက် ရှိသူဟာ အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကို အထူးပြု ပွားများသင့်ပါတယ်။
၅။ သဒ္ဓါစရိုက်ရှိသူဟာ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ၊ ဓမ္မာနုဿတိ၊ သံဃာနုဿတိ၊ သီလာနုဿတိ၊ စာဂါနုဿတိ၊ ဒေ၀တာနုဿတိ ဆိုတဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်း ခြောက်ပါးကို ပွားများပေးရပါတယ်။ ပင်ကိုက ကောင်းနေတဲ့ သဒ္ဓါတရားဟာ ဘုရားတရားသံဃာ စတဲ့အာရုံများနဲ့ ကြုံတွေ့ရပါက ပို၍ဖွင့်ဖြိုး တိုးတက်လာပြီး အကျိုးတရား တိုးပွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကောင်းပြီးသားစရိုက်ကို ပိုကောင်းလာအောင် ဒီသဒ္ဓါစရိုက် ရှိတဲ့သူဟာ ဗုဒ္ဓါနုဿတိစတဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်း ခြောက်ပါးထဲက တစ်ပါးပါးကို ပွားများသင့်ပါတယ်။
၆။ ပညာစရိုက်ရှိသူဟာ သိမ်မွေ့နက်နဲတဲ့ သေခြင်းတရားကို ဆင်ခြင်တဲ့ မရဏာနုဿတိကမ္မဋ္ဌာန်း၊ နိဗ္ဗာန်ကို ဆင်ခြင်တဲ့ ဥပသမာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်း၊ အစာအဟာရမှာ စက်ဆုတ်ဖွယ်လို့ ထင်မြင်အောင် ပွားများတဲ့ အာဟာရေ ပဋိကူလသညာ ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ၀ါယောလို့ခေါ်တဲ့ ဓာတ်ကြီးလေးပါးကို ပိုင်းခြားဆင်ခြင်တဲ့ စတုဓာတု၀၀တ္ထာန ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားများပေးရပါတယ်။ ပင်ကိုက စဉ်းစားချင့်ချိန်တတ်တဲ့ ပညာဟာ သိမ်မွေ့နက်နဲတဲ့ အာရုံနဲ့ ကြုံတွေ့တဲ့အခါ ပိုပြီးနက်နက်နဲနဲ စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အတွက် ဉာဏ်ပညာတိုးပွား ထက်မြက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပညာစရိုက်အားကြီးတဲ့သူဟာ မရဏာနုဿတိ စတဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်းများကို ပွားများပြီး ဉာဏ်အဆင့်တိုးပွားအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ဒီဖော်ပြချက်ကတော့ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာ ပါရှိတဲ့ စရိုက်နဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်း တွဲစပ်ပွားများသင့်တာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူများအနေနဲ့ ဒီစရိုက်ခြောက်ပါးနဲ့ ကိုယ့်သန္တာန်မှာ ရှိနေတဲ့ စရိုက်တွေကို ချိန်ထိုးပြီး ကိုယ်နဲ့သင့်လျော်မယ့် ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားများသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်သန္တာန်မှာ ကောင်းတဲ့စရိုက်ရှိရင်လည်း ဒီစရိုက်ကို ပိုပြီးတိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်၊ မကောင်းတဲ့စရိုက်ရှိရင် ဒီမကောင်းတဲ့စရိုက်ကို နောက်သံသရာအထိ မပါစေရန် အချိန်မီ ပြုပြုနိုင်အောင် လိုအပ်သင့်လျော်မယ့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုကို ပွားများသင့်ပါတယ်။ ၀ိပဿနာအလုပ်ဟာ ကိလေသာကုန်ခမ်း နိဗ္ဗာန်ရရေးအတွက် အဓိကကျတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် ဒီဘ၀မှာလိုအပ်တဲ့ ချမ်းသာနဲ့ နိဗ္ဗာန်မရခင် ကျင်လည်ရမယ့် ဘ၀ချမ်းသာအတွက် တစ်ဘက်ကလည်း ကိုယ့်စရိုက်နဲ့ သင့်မယ့်ကမ္မဋ္ဌာန်း တစ်ခုခုကို ပွားများပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အရိယာမဂ်နဲ့ ကိလေသာများနဲ့ စရိုက်များကို အကြွင်းမဲ့မပယ်သတ်နိုင် သေးပေမယ့် အခိုက်အတန့် အချိန်အတော်ကြာကြာ ခွာထားနိုင်အောင် ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားများပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မကောင်းတဲ့ စရိုက်များကို ကောင်းအောင် ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ ပြုပြင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အမူအရာ၊ နှုတ်အမူအရာ၊ စိတ်အကြံအစီများကို နူးညံ့သိမ်မွေ့လာအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ သိစေချင်တာက လူအမျိုးမျိုး စရိုက်အမျိုးမျိုး ရှိတတ်တဲ့ လောကကြီးမှာ ကိုယ်လည်း စရိုက်တစ်မျိုးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူထဲမှာ ပါနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းတဲ့စရိုက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မကောင်းတဲ့ စရိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုစရိုက်မျိုးကို မဆို ကိုယ်နဲ့သင့်လျော်မယ့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုကို ပွားများရင်း ကောင်းတဲ့စရိုက်ကိုလည်း ပိုပြီးတိုးပွားအောင်၊ မကောင်းတဲ့စရိုက်ဆိုရင်လည်း ပိုပြီးဆိုးမလာအောင် ပြုပြင်ကြည့်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြုပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင် အထုံပါနေတဲ့ စရိုက်လည်း အထိုက်အလျောက် ပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့အတွက် လက်တွေ့ပွားများကာ လေ့ကျင့်ကြည့်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ကိုယ့်စရိုက်နဲ့ သင့်လျော်မယ့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုကို အချိန်ယူပြီး ပွားများပြုပြင် ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အမူအရာ စတာတွေဟာ ပြောင်းလဲနူးညံ့လာမယ်ဆိုတာ သေချာပါကြောင်း…
မှတ်ချက်။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၏ ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ၊ အခြေပြုသင်္ဂြီုဟ်နှင့် ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်၏ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ်တို့ကို ကိုးကားပြီး ရေးသားတင်ပြပါသည်။
။ အချိန် 2/26/2010 11:30:00 AM
လောကီပညတ်နယ်မှာ ရှိနေပါလျက် မျက်စီစုံမှိတ်ပြီး ပညတ်ကိုပယ်ကာ ပရမတ်ပရမတ်လို့ သံကုန်ဟစ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ ဟောပြောချက်များ ဆွေးနွေးချက်များကို နားထောင်ရင်း အစွန်းရောက်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ပညတ်ပယ် အယူအဆအပေါ် စိုးရိမ်မိပါတယ်။ သူ့အတွက် သူ့အယူအဆနဲ့သူ ရှိပါစေလို့ ထားနိုင်ပေမယ့် သူ့ကိုအမှီပြုကာ သူ့နောက်လိုက်နေတဲ့ သူတွေအထိပါ အလွဲတွေ ဖြစ်ကုန်၊ အလွဲတွေ ယူဆကုန်မှာကိုတော့ မလိုလားပါဘူး။ ဘုရားရှင်တောင် ပညတ်ကို မပယ်ခဲ့ဘဲ ဝေါဟာရပညတ် တစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကာ သမ္မုတိသစ္စာအနေဖြင့် ဟောတော်မူခဲ့တာနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး သူက ၀ိနည်းတော်လည်း ပညတ်၊ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာလည်း ပညတ်၊ သံဃာအဖွဲ့အစည်းက ထုတ်ထားတာတွေလည်း ပညတ်စသဖြင့် ပြောဆိုနေတဲ့အပြင် သူပြောလို့ မှားတာတွေကို ထောက်ပြရင်လည်း သူကဒီစကားတွေကို အတည်မယူပါဘူး ပညတ်လို့ သဘောထားပါတယ်၊ အဓိကမကျတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေမှာ အကန့်တွေ မထားပါနဲ့ဆိုပြီး အမှားကို ပညတ်နဲ့ဖာထေးနေပြန်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ် မဟုတ်ဘဲ အစွန်းရောက်နေတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကို စွဲကိုင်ပြီး ဇွတ်အတင်း ငြင်းဆန်နေမှုဟာ လွဲမှားမှုကို ရှည်ကြာစေပြီး အမှန်တရားနဲ့ ဝေးနေစေပါတယ်။
မှန်ပါတယ်။ အာသဝေါကုန်ခမ်း ရဟန္တာဖြစ်ရေးနဲ့ ကိလေသာကုန်ကာ လောကီနယ်မှ ထွက်မြောက်ရေးဟာ ပရမတ်ကို အမှန်နားလည်ပြီး ဉာဏ်နဲ့သိဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ် ဆိုပေမယ့် သမ္မုတိသစ္စာဆိုတဲ့ လောကဝေါဟာရများ၊ လောကသတ်မှတ်ချက်များဟာလည်း ပယ်ကောင်းတဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ထာဝရမရှိနိုင်ပေမယ့် သမ္မုတိသစ္စာဆိုတဲ့ ပညတ်အမှန်တရားဟာလည်း လောကမှာ တကယ်ရှိနေတဲ့ အမှန်တရားပါပဲ။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်လည်း သစ္စာလေးပါးကို သိပြီးနောက်ပိုင်း အတ္တ၀ါဒ ကြီးစိုးနေတဲ့ သူတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး အနတ္တ၀ါဒကို အစွမ်းကုန် ထုတ်ဖော်ဟောကြားခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘုရားရှင်ဟာ ပညတ်ဝေါဟာရကို မပယ်ခဲ့ပါဘူး။ သမ္မုတိသစ္စာကို အသုံးချကာ ပရမတ္ထသစ္စာအဖြစ် သဘောပေါက်အောင် သစ္စာဉာဏ်နဲ့ ထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လောကကြောင်းအရ လိုအပ်တဲ့ ဟောပြောမှုတွေ၊ ပညတ်မှုတွေ၊ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေ၊ ပစ္စုပ္ပန် သံသရာကြီးပွားရေး လမ်းစဉ်တွေကို ချမှတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ဟာ ပရမတ္ထသစ္စာကို သိအောင်ဟောပြောပေးခဲသလို သမ္မုတိသစ္စာကိုလည်း လိုအပ်သလို ထုတ်ဖော်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပရမတ္တသစ္စာကိုပဲ တစ်ဘက်သတ်စွဲကိုင်ပြီး သမ္မုတိသစ္စာကို ပယ်ခဲ့ရိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒီလို ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး အရာရာ ပညတ်တွေပါဆိုကာ ထင်ရာဟောပြော နေမိပါက လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး ဆုံမသလို “ပရမတ်ပြန် အကြောင်သမားတွေမို့ ထောင်လွှားကြသူ့ထက်ငါ” ဖြစ်ကာ အပါယ်ဘောင်လားကြရမယ့် ကိန်းဆိုက်နေပါလိမ့်မယ်။ လယ်တီဆရာတော်ကြီးရဲ့ ၀ိပဿနာ ဒီပနီ၊ သစ္စာကထာမှာ ရှင်းပြတော်မူခဲ့တဲ့ သစ္စတရား ၂ပါးရှင်းတမ်းလေးကို ဖတ်မိတော့ ပရမတ်ပြန် အကြောင်သမားတွေ သိထားသင့်တဲ့ အချက်ပါလားလို့ တွေးမိပါတယ်။ ဒီသစ္စကထာမှာ ဆရာတော်ကြီးက အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြတော်မူပါတယ်။
“သစ္စာဆိုသည်ကား သူ့အမည်သညာနှင့် သူ့သဘာဝ အစဉ်ထာဝရ ညီညွတ်ဖြောင့်မှန်သည်ကို ဆိုသတည်း။ ထိုသစ္စာသည် (၁) သမ္မုတိသစ္စာတစ်ပါး၊ (၂) ပရမတ္တသစ္စာ တစ်ပါးဟူ၍ နှစ်ပါးအပြားရှိ၏။ ထိုနှစ်ပါးတို့တွင် သမ္မုတိသစ္စာဆိုသည်ကား လောကီဘုံသား လူအများတို့၏ ခေါ်ရိုးပြောရိုးဖြစ်သော သမ္မုတိပညတ်တို့၏ အလယ်၌ အဖြောင့်အမှန်မျိုးသည် သမ္မုတိသစ္စာမည်၏။ အတ္တရှိ၏၊ ဇီဝရှိ၏၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိ၏၊ သတ္တ၀ါရှိ၏၊ လူရှိ၏၊ နတ်ရှိ၏၊ သိကြားရှိ၏၊ ဗြဟ္မာရှိ၏၊ ဆင်မြင်းကျွဲနွားရှိ၏၊ ဦးခေါင်း လက် ခြေစသော အင်္ဂါကြီးငယ်ရှိ၏၊ ဆံပယ်အမွေး ခြေသည်းလက်သည်းရှိ၏ စသည်တို့ပေတည်း။
ဤသမ္မုတိသစ္စာသည် မုသာဝါဒ၏ ဆန့်ကျင်ဖက်ပေတည်း။ မုသာဝါဒကို ပယ်နိုင်၏။ တစ်ဘ၀အတွင်းတွင် အခါခါဖြစ်ခြင်း၊ အခါခါချုပ်ခြင်းဟူ၍ မရှိပဲ တစ်ခုတည်းနှင့် တစ်သက်လုံး ခိုင်မြဲနေသော အတ္တမည်သည် ဧကန်အမှန်ရှိ၏။ ဇီဝမည်သည် ဧကန်အမှန်ရှိ၏ဟု ပြောဆိုကြသော စကားမျိုးတို့သည် လောကီဘုံသား လူအများတို့၏ ပြောရိုးဆိုရိုးအတိုင်း ပြောဆိုကြသော စကားဖြစ်၍ ပြောဆိုသောသူမှာ မုသာဝါဒမဖြစ်၊ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ လှည့်စားခြင်းမဖြစ်။ ပရမတ္ထသစ္စာ အလိုအားဖြင့်မူကား ထိုစကားသည် အနိစ္စ၌ နိစ္စဟူ၍ ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ အနတ္တ၌ အတ္တဟူ၍ ဖောက်ပြန်ခြင်းတည်းဟူသော ၀ိပလ္လာသအမှန်ဖြစ်၏။ ထိုဝိပလ္လာသတရားကို မယ်နိုင်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး သံသရာဝဋ်ဒုက္ခမှ မလွတ်နိုင်။
ပရမတ္ထသစ္စာဆိုသည်ကား ဓာတ်သဘာဝ၊ ဓမ္မသဘာဝ အလိုအားဖြင့် အလွန်ဟုတ်မှန်လှသော ရှိမရှိစကားမျိုး တရားမျိုးသည် ပရမတ္ထသစ္စာမည်၏။ ရှိမရှိနှစ်ပါးတွင် ရှိဆိုသည်ကား ပထ၀ီဓာတ်ရှိ၏၊ အာပေါဓာတ်ရှိ၏၊ တေဇောဓာတ်ရှိ၏၊ ၀ါယောဓာတ်ရှိ၏၊ စိတ်ဝိညာဏ်ရှိ၏၊ ဖဿ ဝေဒနာ သညာ စေတနာစသည်ရှိ၏။ ရုပ်ခန္ဓာရှိ၏၊ နာမ်ခန္ဓာရှိ၏ စသည်တို့ပေတည်း။ မရှိဆိုသည်ကား အတ္တမရှိ၊ ဇီဝမရှိ၊ ပုဂ္ဂိုလ်မရှိ၊ သတ္တ၀ါမရှိ၊ လူမရှိ၊ နတ်မရှိ၊ သိကြားမရှိ၊ ဗြဟ္မာမရှိ၊ ဆင်းမြင်းကျွဲနွားမရှိ၊ ဦးခေါင်းဟူ၍ မရှိ၊ လက်ခြေစသော အင်္ဂါကြီးငယ်ဟူ၍ မရှိ၊ ဆံပင်အမွေး ခြေသည်းလက်သည်းဟူ၍ မရှိစသည်တို့ပေတည်း။
သမ္မုတိသစ္စာအလိုအားဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရှိ၏။ သတ္တ၀ါရှိ၏။ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါတို့သည် တစ်ဘ၀မှ တစ်ဘ၀သို့ ကျင်လည်ပြောင်းသွား၍ နေကြ၏။ ပရမတ္ထသစ္စာ အလိုအားဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်မရှိ၊ သတ္တ၀ါမရှိ၊ တစ်ဘ၀မှတစ်ဘ၀သို့ ကျင်လည်ပြောင်းသွားသည်ဟူ၍ မရှိ။ သို့သော် ဤသစ္စာနှစ်ပါးသည် ဖြောင့်ဖြောင့်ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်နေဘိ၏တကားဟု ဆိုရန်ရှိ၏။ ဖြောင်ဖြောင့်ဆန့်ကျင်ဖက် မဖြစ်ကြစေရန် အဖြေမှာကား သမ္မုတိသစ္စာအလို ပရမတ္ထသစ္စာအလိုဟူ၍ အလိုနှစ်ပါးသီးသန့်ခြားလျက် ရှိလေပြီ။ သမ္မုတိသစ္စာအလိုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါစသည် ရှိ၏ဟု ပြောဆိုခဲ့သော် သမ္မုတိသစ္စာအလို ဆိုသောကြောင့် ပရမတ္ထသစ္စာဆရာက မငြင်းပယ်ရ။ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါဟု သမ္မုတိပညတ်ရှိသည်ကား အမှန်ပင်ဖြစ်၏။ ပရမတ္ထသစ္စာအလိုအားဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါ မရှိဟူ၍ ပြောဆိုခဲ့သော် ပရမတ္ထသစ္စာအလို ဆိုသောကြောင့် သမ္မုတိသစ္စာဆရာက မငြင်းပယ်ရ။ ပရမတ္ထသစ္စာဟူသည် ရုပ်တရား နာမ်တရားသည်သာ အမှန်ပင်ဖြစ်၏။ ပရမတ္ထသစ္စာမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ မရှိသတ္တ၀ါဟူ၍မရှိ။…”
ဒီမှာ ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ လယ်တီဆရာတော်ကြီးရဲ့ သစ္စာအဖွင့်ကို ကြည့်ပါက ပရမတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲ ဆွဲကိုင်ကာ ပညတ်မှန်သမျှကို ပယ်ဖို့ကြိုးစားနေသူများ အထူးသတိပြုသင့်တဲ့ အချက်ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သစ္စာနှစ်မျိုးလုံး သူ့ရှုထောင့်နဲ့သူ အမှန်ပင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တစ်မျိုးတည်း ဆုတ်ကိုင်ပြီး ကိုယ်ဆုတ်ကိုင်ထားတာကိုပဲ အမှန်လို့ အတင်းမငြင်းပယ်သင့်တာကို သတိပြုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုတစ်မျိုးတည်း ဆုတ်ကိုင်ထားပါက လောကနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက် အစွန်းရောက်သွားတတ်တာကို သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်အခါနဲ့ ကာလဒေသအလိုက် ပညတ်နဲ့ ပရမတ်ကို ညီမျှအောင် အသုံးချတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ဒါတွေဟာ ပညတ်တွေပါဆိုပြီး အရာရာ ပညတ်ကိုပုံချမယ်ဆိုရင်တော့ လောကနဲ့ဆန်ကျင်ကာ အစွန်းမလွတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ လမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကို ပယ်ရာရောက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ ပြောလိုတာက ပညတ်ကို ပယ်တယ်ဆိုတာ တစ်လွဲအမြင် တစ်လွဲအတွေး တစ်လွဲနားလည်မှုနဲ့ အစွန်းရောက်တဲ့အထိ မဖြစ်ကြဖို့ပါ။ ပရမတ်က အဓိကကျပေမယ့် ပညတ်ကလည်း လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ လိုပြန်ပါတယ်။ ပညတ်တွေဟာ စွဲကိုင်ထားဖို့ မဟုတ်ပေမယ့် လောကကြောင်းအရ လိုအပ်တဲ့ အမှန်တရားတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် လစ်လျူရှုဖို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အခေါ်အဝေါ် သတ်မှတ်ချက်တွေဆိုပေမယ့် လောကသားတွေရဲ့ မကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ထိန်းပေးတဲ့ အမှန်တရားများ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေကိုလည်း လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ လိုပါတယ်။ ပညတ်နယ်က လွန်ပြီး ပရမတ်နယ်ကို အလုံးစုံရောက်သွားကြတဲ့ ကိလေသာကုန်ခမ်း ရဟန္တာများပင် လောကကြောင်းအရ ပညတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ်စတဲ့ ပညတ်ချက်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပရမတ်တစ်ခုတည်းကို ကိုင်စွဲပြီး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပညတ်တွေပါပဲလို့ ပညတ်ကို ပယ်နေသူများ အနေဖြင့် တစ်လွဲနားလည်မှုများနဲ့ အစွန်းမရောက်အောင် သတိဆောင်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ အဆုံးစွန်ထိ မရောက်သေးဘဲ အနည်းငယ် သိတာလေးများနဲ့ ပရမတ်ပြန် အကြောင်သမားများ မဖြစ်ကြဖို့နဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မဇ္ဈိမပဋိပဒါဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ အထူးလိုအပ်ကြောင်း အသိပေးတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
။ အချိန် 2/24/2010 05:03:00 PM
မြန်မာနိုင်ငံကနေ နိုင်ငံခြားထွက်ပြီး အလုပ်လာလုပ်နေတဲ့ ဒကာလေးတစ်ယောက် တစ်နေ့ကျောင်းကို ရောက်လာပြီး ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် စကားတွေ ပြောကြရင်း သူ့အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းပြောဆို ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့အကြောင်း၊ ဒီကိုရောက်လာဖို့ စောင့်ရတာ တော်တော်လေး ကြာသွားကြောင်း၊ ပိုဆိုးတာက နိုင်ငံခြား ရောက်မလာခင် ပြည်တွင်းမှာနေတုန်း သုံးခဲ့ရတဲ့ ငွေတွေရဲ့ အတိုးတွေက တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးတိုးနေတာက ပိုဆိုးကြောင်း၊ ဒါကြောင့် အခုလို ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ အတိုးနဲ့ချေးခဲ့ရတဲ့ ငွေကြွေးတွေကို အရင်ကျေအောင် ဆပ်ဖို့လုပ်နေရကြောင်း စသဖြင့် ဒကာလေးက ပြောပြပါတယ်။ သူပြောတာကို နားထောင်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပေမယ့် အားပေးဆုံးမစကားတော့ ပြောဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ “ဒီလို ခက်ခက်ခဲခဲ အကြွေးတွေအတင်ခံပြီး ရောက်လာပြီးနောက်မှာ ကိုယ်လာခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေ၊ ကိုယ့်ဘ၀အခြေအနေကို မမေ့ဖို့နဲ့ သူများဆီက ယူထားခဲ့တဲ့ အကြွေးတွေကို အရင်ကျေအောင် ကြိုးစားဆပ်ရင်း ကိုယ့်ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက်လည်း အသုံးနဲ့အဖြုန်း ဆင်ခြင်သုံးဖို့…” စသဖြင့် ထုံးစံအတိုင်း ဆုံးမပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒကာလေး ပြန်ခါနီးမှာ “ဒကာလေးရေ… ဒီကိုရောက်လာပြီးမှ အကြွေးဆပ်ရင်း အကြွေးထပ်နေ သူတွေလိုတော့ မဖြစ်စေနဲ့နော်…”လို့ ထပ်ပြီး သတိပေးစကား ပြောဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အကြွေးဆပ်ရင်း အကြွေးထပ်နေသူ မဖြစ်အောင် ပြောဖြစ်လိုက်တာက အကြွေးဆပ်ရင်း အကြွေးတွေ ထပ်တင်နေကြတဲ့ ရွှေမြန်မာ အချို့ကို တွေ့နေရလို့ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ကြုံတိုင်းပြောနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ နိုင်ငံခြားမထွက်ခင်က စိတ်ကူးရင် စီမံချက်တွေ အပြည့်နဲ့ ဟိုရောက်ရင် ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုကြိုးစားရှာမယ်၊ ရသမျှကိုစုပြီး မထွက်ခင်က ချေးငှါးထားတဲ့ အကြွေးတွေရယ် အတိုးတွေရယ်ကို အရင်ကြေအောင်ဆပ်ကာ ကျန်တဲ့အလုပ်သက်တမ်းကိုတော့ မိသားစု စားဝတ်နေရေးနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ ရှေ့ရေးအတွက် ကြိုးစားစုမယ် ဆိုပြီး ထွက်လာကြပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရောက်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ ပြည်တွင်းမှာ ရှိတုန်းက သိထားတဲ့ အခြေအနေနဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ အနေအထား မတူညီတာတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကြောင့် မထွက်ခင် ယဉ်ခဲ့ရတဲ့ စိတ်ကူးတွေဟာ ပျောက်ကုန်ပါတော့တယ်။ စိတ်ကူးပျောက်နေပေမယ့် အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ပြီး အကြွေးလေးတွေ ကျေတဲ့အထိ ဆပ်နိုင်ရင်တော့ တော်ပါသေးတယ်။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ အကြွေးမကြေခင် အကြွေးဆပ်ဖို့ လုပ်နေရင်း စိတ်ပင်ပန်း၊ ကိုယ်ပင်ပန်းဖြစ်လို့ စိတ်ဖြေတဲ့အနေနဲ့ အရက်သောက်၊ ဖဲရိုက်၊ အလောင်းအစား လုပ်ဖြစ်လိုက်ရင်တော့ အကြွေးကျေဖို့နေနေသာသာ ဆပ်ရမယ့် အကြွေးတွေပဲ ထပ်ထပ်တင်လာပါလိမ့်မယ်။ အကြွေးဆပ်ရင်း အကြွေးတွေ ထပ်လာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့ကလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ပြည်ပအတွေ့အကြုံမရှိ၊ ဘုမသိ ဘမသိဆိုတော့ အခက်အခဲတွေ ကြုံတဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်မကြံ့ခိုင်ဖြစ်ပြီး စိတ်အလိုလိုက် လုပ်ဖြစ်တာတွေပါ။ ဒီလို အခါမျိုးမှာ အပေါင်းအသင်းမှားပြီး ပေါင်းမိရင်တော့ ဘ၀မှာ အဖက်ဆယ်ဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။ နစ်ပြီးရင်းနစ် ဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်။
အပေါင်းအသင်းဆိုတာကလည်း ကောင်းတဲ့ဘက်မှာ အဖော်ပြုဖို့ ခက်သလောက် မကောင်းတဲ့ဘက်မှာတော့ အချိန်မရွေး ရှိနေတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်တွေကျလို့ ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်အောင် သူတော်ကောင်းစကားတွေ သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ ဖေးမကူညီပေးဖို့ထက် “လာပါကွာ ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းချည်ပဲ၊ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် စိတ်မညစ်နဲ့”လို့ဆိုကာ အရက်ဆိုင်ခေါ်သွား၊ ဖဲရိုက်ခေါ်သွား၊ နှိုက်ကလပ်ခေါ်သွားတာတွေက များပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကိုယ်က အချိန်မှီမထိန်းဘဲ အဲဒါတွေအပေါ်မှာ သာယာမိပြီ ကျေနပ်မိပြီ ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံခြား ထွက်လာတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပျောက်ပြီး အကြွေးဆပ်ဖို့နေနေသာ အကြွေးတွေတောင် ထပ်လာကုန်တတ်ပါတယ်။ မကောင်းမှုဆိုတာက အစမလုပ်တာကောင်းပါတယ်။ စမိရင် ဖြတ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးလေ။ စိတ်ဖြေတဲ့သဘောနဲ့ အပျော်စမိရာက ဖြတ်မရဖြစ်ကုန်တဲ့ သူတွေကလည်း မနည်းဘူးမဟုတ်လား။ တစ်ချို့ဆို စိတ်ဖြေတဲ့အနေနဲ့ အပျော်ဖဲကစားရာမှ ရှုံးလို့မဲလိုက်ရင်း ဆပ်ရမယ့် ဖဲကြွေးက သူ့ရဲ့ လုပ်ခ လေးငါးလစာအထိ ဖြစ်ကုန်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ကြွေးဟောင်းဆပ်ဖို့ဝေးစွ ဖဲကြွေးအတွက် ကြွေးသစ်တွေပဲ တိုးလာပါတယ်။ ဒီကြားထဲ မာတုဂါမ ကိစ္စပါ ပါလာပြီဆိုရင်တော့ ကုန်ဖို့သာ ပြင်ပေတော့လို့ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့ လက်တွေ့တွေ့နေရတဲ့ သူတွေတောင်မဟုတ်ဘဲ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချက်တင်းလုပ်ရင်း တွေ့တာတွေနဲ့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတာလည်း မနည်းဘူး။ တစ်ချို့ကလေးတွေဆို အွန်လိုင်းမှာ တွေ့တဲ့ မာတုဂါမကို စွဲလန်းမိလို့ အကြွေးထပ်တင်တာတောင် ရှိသေးတယ်။ ဟိုဘက်က မာတုဂါမကလည်း အပျော့စွဲလေးနဲ့ ဟိုးချွဲဒီခွဲလုပ်ကာ ဘာလိုတယ်၊ ညာလိုတယ်ဆိုပြီး တောင်းတတ်ပါတယ်။ ဒါကို ဒီဘက်က ဘသားချောက အဟုတ်မှတ်လို့ မရှိရှိတာ ရှာဖွေချေးငှါး ပို့ပေးရှာပါတယ်။ နောက်တော့ မာတုဂါမက သူ့ကိုပစ်ပြီး အသစ်ရှာတယ်တဲ့လေ။ အဲဒါနဲ့ သူမှာ ဒုက္ခတစ်ခုတိုးပြီး မာတုဂါမအတွက် ပို့ပေးတာတွေပါ အကြွေးတင်ကာ ဆပ်နေရပြန်ပါတယ်။ ဒါဟာ အကြွေးဆပ်ရင်း အကြွေးထပ်နေတာတွေပါ။ လုပ်ကြံမဟုတ်တဲ့ လက်တွေ့အဖြစ်တွေပါ။
အင်း…ဒီလို အကြွေးကိစ္စတွေဟာ ဒီဘ၀ ဒီလောက်ပဲ ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ တော်သေးတယ်လို့ ပြောရပါမယ်။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ သံသရာအထိ ပါသွားမယ့် အကြွေးတွေသာဆိုရင် တွေးတောင်မတွေးရဲ စရာပါပဲ။ အခုဘ၀မှာတောင် အတိတ်ဘ၀တွေက လုပ်ခဲ့တဲ့အကြွေးတွေကို ကျေအောင်မဆပ်နိုင်သေးဘဲ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် နောက်ထပ် ပေးဆပ်ရမယ့် သံသရာနဲ့ချီတဲ့ အကြွေးတွေ ထပ်တိုးနေမယ်ဆိုရင်တော့ အကြွေးကင်းရာ နိဗ္ဗာန်နဲ့ကတော့ ဝေးပြီးရင်းဝေးရင်း ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုဟာ စေတနာပါပါနဲ့ လုပ်လိုက်မိရင် အကြွေးဖြစ်စေပါတယ်။ အကြွေးဆိုရင်တော့ ပေးဆပ်ရမှာပါ။ ထုံးစံအတိုင်း ပေးဆပ်တဲ့အခါ အရင်းရော အတိုးရော ပေးဆပ်ရသလို ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး လုပ်လိုက်တဲ့ မကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုဟာ သူ့ရဲ့တန်ပြန် အကျိုးပေးကို ခံရတဲ့အခါမှာ ပေးဆပ်ရတဲ့ အတိုးက ဖော်မပြနိုင်အောင် များပါတယ်။ တစ်ချို့အတိုးတွေဆို အောက်ကနေ ပြန်မတက်နိုင်လောက်အောင်၊ ဘုရားပွင့်သော်လည်း ဘုရားသာသနာနဲ့ ကြုံခွင့်မရအောင်၊ အကြွေးဆပ်ပြီးပြန်တော့လည်း ကောင်းတဲ့သုဂတိဘ၀မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မဖြစ်သေးဘဲ အိုနာကျိုးကန်းအဖြစ် ပြန်ဖြစ်အောင်အထိ အပိုပေးဆပ်လိုက်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ အတိုးပေါ် အတိုးထပ်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါဟာ မကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုကြောင့် ပေးဆပ်ရတဲ့ အကုသိုလ်အကြွေးရဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာလိုပြောတော့ ကံကံရဲ့အကျိုးပဲပေါ့။
လောကဓံလှိုင်း ရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့် ဘာပဲလုပ်လုပ် အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတဲ့ ဒကာလေးတစ်ယောက်က “အရှင်ဘုရားရေ… တပည့်တော် ဘ၀ကလည်း ၀ဋ်ကြီးလိုက်တာဘုရား…၊ ဘာပဲလုပ်လုပ် အဆင်မပြေဘဲကို ဖြစ်နေပါတယ်။ အိမ်မှာဆိုလည်း အကြီးဆုံးဆိုတော့ အကိုကြီး အဖအရာ သဘောထားပြီး တပည့်တော် ဘ၀နဲ့ရင်းကာ အိမ်အတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။ အိမ်မှာလည်း ပြည့်စုံတယ်ကို မရှိပါဘူး။ အသက်အရွယ် ရလာတဲ့ ခုချိန်ထိတောင် အိမ်အတွက်တွေးရင်း အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စိတ်မကူးနိုင်သေးဘူး။ တပည့်တော် ရည်စားကဆို မစောင့်နိုင်လို့ စွန့်တောင်သွားပါတယ်။ ဒီကြားထဲ တပည့်တော်အောက်က ညီတွေက မလိမ္မာတော့ သူတို့ကိစ္စတွေအထိ လိုက်ဖြေရှင်းနေ၊ ဆောင်ရွက်နေရတော့ တပည့်တော် ရှာသမျှ ဘာမှအဖတ်မတင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်ဘုရား၊ အရှင်ဘုရား သိတဲ့အတိုင်း တပည့်တော်ရဲ့ ၀ဋ်ကြွေးက ကြီးတော့ တပည့်တော် ဒီဘ၀မှာ အတတ်နိုင်ဆုံး ကံငါးပါးကို လုံအောင်ထိန်းပြီး ဘာသာတရားကို ကြိုးစားလုပ်ပါတယ်၊ ဒီလို ကုသိုလ်လေးတွေ လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းလည်း အတိတ်ရဲ့ ၀ဋ်ကြွေးတွေ ဒီဘ၀ဒီမျှနဲ့ပဲ ကျေပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ် ဘုရား..၊ အရှင်ဘုရားအနေနဲ့ တပည့်တော်ကို တစ်ခုခု မိန့်ကြားပေးပါဘုရား…” စသဖြင့် လျှောက်ဖူးပါတယ်။
“ဟုတ်တယ် ဒကာလေးရေ…။ အကြွေးဆိုတာကတော့ ဆပ်ပေးရမှာပဲ။ အတိတ်က ကိုယ်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အကုန်မသိနိုင်ပေမယ့် အခုဘ၀ရဲ့ အခြေအနေတွေဟာ အတိတ်ဘ၀တစ်ခုခုက ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေရဲ့ အကြွေးတွေပါပဲ။ အတိတ်ကချေးခဲ့တဲ့ အကြွေးတွေရဲ့ အတိုးတွေပါပဲ။ ဘယ်လောက်ထိ ဆပ်ရမယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်၊ မသိနိုင်ပေမယ့် အဲဒီအတိတ်ကြွေးတွေကို ဆပ်ရင်း နောက်ထပ် အကြွေးသစ်တွေ မတိုးဖို့ဘဲ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ ကြိုးစားရတော့မှာပါ။ ၀ဋ်ကြွေးတွေကြီးတယ်ဆိုပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်ကာ နောက်ထပ်အကြွေးတွေ ထပ်မရှိဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ကြုံလာသမျှ ဒုက္ခတွေကို ခါးစည်းခံပြီး စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ ကြိုးစားရင်း အတိတ်က အကြွေးကို ဆပ်နိုင်သမျှ ဆပ်နိုင်အောင် လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အကြွေးကျေတာမကျေတာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘဲ နောက်ထပ်အကြွေးမတင်အောင် စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာ ကြိုးစားပြီး လုပ်ရမှာကပဲ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကြွေးဟောင်းကို ဆပ်ရင်း ကြွေးသစ်မထပ်အောင် ကိုယ့်ရဲ့ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံတွေကို သတိနဲ့ထိမ်းပြီး ပြုမူပြောဆိုကြံစီ နေထိုင်ဖို့ကသာ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒကာလေး အနေနဲ့ အတိတ်က အကြွေးတွေကိုဆပ်ရင်း နောက်ထပ်အကြွေးတွေ မထပ်ရအောင် ကောင်းတဲ့စိတ်စေတနာများနဲ့သာ တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားနေထိုင်ဖို့၊ အပါယ်လားစေနိုင်တဲ့အထိ အတိုးကြီးတတ်တဲ့ အကြွေးတွေ မတင်မိအောင် ကံငါးပါးကို လုံအောင်ထိန်းပြီး မကောင်းတဲ့ ဒုစရိုက်များကို ရှောင်ကာ ကောင်းတဲ့သုစရိုက်များနဲ့ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့နဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ဋ်ကြွေးအားလုံးကို အကျေဆပ်နိုင်မယ့် ၀ိပဿနာအလုပ် အားထုတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ပဲ တိုက်တွန်းရမှာပါ....” စသဖြင့် အကြွေးဆပ်ရင်း အကြွေးမထပ်အောင် အဲဒီဒကာလေးကို မိန့်ကြားပေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ အထူးပြောချင်တာက အကြွေးဆပ်နေရတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကို မမေ့ကြဖို့ပါ။ အတိတ်ဘ၀တစ်ခုခုက တင်ကျန်လာတဲ့ အကြွေးတွေကို ဒီဘ၀မှာ လာဆပ်ရင်း အကြွေးပေါ် အကြွေးမထပ်အောင်၊ အတိုးပေါ် အတိုးမထပ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ပါ။ ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါ တစ်ဘ၀တစ်နပ်စာကို ကြည့်ပြီး ဖြစ်သလို မလုပ်ကြပဲ သံသရာနဲ့ချီကာ ပေးဆပ်ရမယ့် အတိုးကြွေးကို တွေးလို့ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ကြဖို့ပါ။ မကောင်းတဲ့ စိတ်စေတနာနဲ့ လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်များရဲ့ အကြွေးအတိုးဟာ ကြောက်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ကြီးမားတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီး ဘာပဲလုပ်လုပ် ကောင်းတဲ့စိတ် စေတနာလေးတွေနဲ့ လုပ်ကြဖို့ပါ။ သေချာတာကတော့ အကြွေးရှိရင် ဆပ်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ “အကြွေးဆပ်ရင်း အကြွေးထပ်နေသူများ မဖြစ်စေကြဘဲ အကြွေးဆပ်ရင်း အကြွေးမထပ်အောင်သာ ကြိုးစားကြပါ..”လို့ပဲ ပြောပါရစေတော့။
Live Questions and Answers (1)…
။ အချိန် 2/24/2010 07:32:00 AM
7 Feb 10, 08:11 AM
အရှင်ရာဟုလာက တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ဆိုတာ သိလိုပါတယ်ဘုရား။ သက်တော် ၄၀ မပြည်မီ၊ တစ်နေရာမှာလဲ ၅၀ မပြည့်မီ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘဝပေါင်းများစွာ ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ ဆုကြီးပန်ဖြစ်ရင် ဘာကြောင့် သက်တော် မရှည်ရတာပါလဲဘုရား။
7 Feb 10, 07:28 PM
မနာပဒါယီ >> Anonymous:
ပိဋကသုံးပုံ ပါဠိတော် မူရင်းတွေမှာတော့ အရှင်ရာဟုလာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဟောကြားချက်များ၊ ဆုံးမချက်များ၊ အရှင်ရာဟုလာရဲ့ သိက္ခာသုံးပါး အကျင့်တရားကျင့်ပုံများ၊ ရာဟုလောဝါဒ သုတ္တန်များ စတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲ တွေ့ရပါတယ်။ မဟာဝဂ္ဂ သံယုတ်အဋ္ဌကထာ နှာ၊ ၂၄၆မှာတော့ အရှင်ရာဟုလာမထေရ် တာဝတိံသာ နတ်ပြည်တွင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြောင်း ဖော်ပြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်သက်တော်၄၀ ဒါမှမဟုတ် ၅၀မပြည့်မီ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ဘ၀ပေါင်းများစွာ ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ ပါရမီရှင်ကြီးတိုင်း ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀မှာ လိုချင်သလို သက်တမ်းအတိုအရှည် မပြုကြပါဘူး။ အတိတ်ဘ၀ ပါရမီ ဖြည့်စဉ်ကာလ တစ်ခုခုမှာ အမှားပြုခဲ့တဲ့ ၀ဋ်အကျိုးပေး ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီ အကျိုးပေးအတိုင်း ပြုမူနေထိုင် သွားတတ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဘုရားရှင်အပါအ၀င် အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်စတဲ့ မထေရ်ကြီးများလည်း ဒီလိုပဲ ၀ဋ်ကြွေးအတိုင်း နောက်ဆုံးဘ၀မှာ ပေးဆပ်တော်မူသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရှင်ရာဟုလာမထေရ်အနေနဲ့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခြင်းဟာ ဒီအကြောင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
12 Feb 10, 09:52 PM
Phone Phone, Please explain me about ashin Sula Pan. If his elder brother, Ashin Maha Pan is alsoaarahat, why did he act lack of marcy upon other monk (his young brother)? Just being naive and not just be naive and not beingabright person is only his fate. Not his crime. Why did Ashin Mahapan do like that?
14 Feb 10, 02:49 AM
စူဠပန္ထက မထေရ်ဟာ ကဿပမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက် ဉာဏ်ထိုင်းတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးကို ကဲ့ရဲ့ခဲ့မိတဲ့အတွက် ယခုဘ၀မှာ ဉာဏ်ပညာထိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကို အကိုဖြစ်တဲ့ မဟာပန္ထကက ဒီလောက်ဉာဏ်ထိုင်းနေရင် သာသနာတော်နဲ့ မတော်ဘူးဆိုပြီး နှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ အစ်ကို ရဟန်းအနေနဲ့ ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ တွေးစရာရှိပါတယ်။ စာပေမှာကတော့ အစ်ကိုရဟန်းဟာ ရဟန္တာဖြစ်ပေမယ့် စူဠပန္ထကရဲ့ အလိုအဇ္ဈာသယကို မသိသောကြောင့် ညီတော်ကို တရားထူး ရစေလိုတဲ့ စေတနာအားကြီးပြီး မရတဲ့အခါ အားမလို အားမရဖြစ်ကာ နှင်ထုတ်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကလည်း အကယ်၍ ဒီလိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက် မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ကာ အခုလို တရားကမ္မဋ္ဌာန်းပြပေးမှုကို ရစေလိုလို့လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သာဝကတွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဉာဏ်ပညာကြီးပါစေ ဘုရားရှင်တို့လောက် ဝေနေယျစ္ဆာသယကို မသိနိုင်ပါဘူးလို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ တရားမင်းဖြစ်တော်မူတဲ့အတွက် တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဘယ်လိုတရားနဲ့ သင့်လျော်တယ်ဆိုတာ သိပြီး ဟောတော်မူနိုင်တဲ့အတွက် စူဠပန္ထကကိုလည်း ရဟန္တာအဖြစ် ရောက်စေတော်မူပါတယ်။
သေချာတာကတော့ မဟာပန္တကမထေရ်ဟာ ရဟန္တာဖြစ်နေတဲ့အတွက် ညီတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလိုဆိုးကတော့ မရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ တရားအနှစ်ထူးကို ရစေလိုတဲ့ စေတနာအားကြီးတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ မဟာပန္ထကမထေရ်ဟာ ဘုရားရှင်လောက် သတ္တ၀ါတွေရဲ့ အလိုဆန္ဒကို မသိဘူးနိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို လုပ်ရပ်မျိုး လုပ်မိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စေတနာမပါတဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။ အကယ်၍ စေတနာပါခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း ဘုရားရှင်ရဲ့ ဟောပြောမှုကြောင့် ညီတော် တရားရနိုင်တာကို သိတဲ့အတွက် ဘုရားရှင်နဲ့ ညီတော် တွေ့စေလိုတဲ့ စေတနာပါတယ်ဆိုတာ နားလည်ကြည်ညိုနိုင်ပါတယ်။
22 Feb 10, 10:54 PM
ကုမာ၇ီ ဗြဟဟစရိယသီလအကြောင်း ရှင်းပြပါဘုရား။ အ်ိမ်ထောင်မရှိတဲ့သူတွေ စောင့်လိုရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားဘုရား…။
23 Feb 10, 05:04 AM
ကောမာရဗြဟ္မစရိယသီလလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်မရှိသူများ မေထုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မကျင့်သုံးဘဲ တစ်သက်လုံး ဆောက်တည်သွားခြင်းမျိုးပါ။ ငါးပါးသီလမှာ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ အစား အဗြဟ္မစရိယနဲ့ အစားထိုးကျင့်သုံးတဲ့ သီလမျိုး ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုပြီးမြင့်မြတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတော်စင်တို့ စက်ဆုတ်ဖွယ် ယုတ်မာသော ကာမဂုဏ်မေထုန်အကျင့်ကို လူ့ဘ၀မှာပင် ကျေကျေနပ်နပ် ရှောင်ကြဉ်ဆောက်တည်တဲ့ ပါရမီရှင် သူတော်စင် အကျင့်လို့ဆိုပါတယ်။ ကောမာရဗြဟ္မစရိယဆိုတာ ငယ်သွေးငယ်မူ ဖြူစင်သူတို့ရဲ့ မြတ်သောအကျင့်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒီသီလ တောင်းပုံကတော့ “အဟံ ဘန္တေ တိသရဏေန သဟ ကောမာရဗြဟ္မစရိယသီလံ ဓမ္မံယာစာမိ၊ အနုဂ္ဂဟံ ကတွာ သီလံဒေထ မေဘန္တေ” (အရှင်ဘုရား တပည့်တော်အား သရဏဂုံးသုံးပါးနှင့်တကွ ကောမာရဗြဟ္မစရိယ သီလကို သနားစောင့်ရှောက် ချီးမြှောက်သဖြင့် ပေးသနားတော်မူပါ) လို့ တောင်းရပါတယ်။ အမျိုးသမီးဆိုရင် ကောမာရီဗြဟ္မစရိယသီလံလို့ အစားထိုးဆိုရုံပါပဲ။ ဒီလို သီလတောင်းပြီး ငါးပါးသီလ သိက္ခာပုဒ်ယူတဲ့အခါမှာ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ နေရာမှာ အဗြဟ္မစရိယာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိလို့ အစားထိုးဆိုရုံပါပဲ။ အမှန်တော့ ဒီကောမာရဗြဟ္မစရိယသီလဆိုတာ မေထုန်မှုမပြုတဲ့ ငါးပါးသီလပါပဲ။ သာမန်လူများ နေ့စဉ်စောင့်ထိန်းရမယ့် သီလမှာ မေထုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျင့်ကို မြင့်မြတ်စွာ အထူးစောင့်ထိန်းခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စောင့်ထိန်းနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ...။
နဲနဲလေးတော့ လွဲနေတယ် (၄)...
။ အချိန် 2/22/2010 04:15:00 PM
လူငယ်တွေကြား၊ တစ်ချို့လူတွေကြားမှာ အလွဲနားလည်ပြီး အသုံးပြုနေတဲ့ စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုံးတဲ့စကားပါ။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးကြားမှာ အချစ်တွေကို ဖော်ပြပြီး တွင်တွင်ကြီး သုံးနေတာတွေမှာ လွဲနေတာလေးက “ဒို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘာမှမရှိဘူး၊ ဒို့အချစ်က ရိုးသားတယ်၊ ဒို့မင်းအပေါ်မှာထားတဲ့ အချစ်ဟာ ၅၂၈အချစ်မျိုးပါ..”စသဖြင့် သုံးနေကြတာ ရှိသလို “ဒို့မင်းကိုချစ်တာ ၁၅၀၀အချစ်မျိုးနဲ့တင် မဟုတ်ဘူး ၅၂၈အချစ်မျိုးနဲ့ပါ ချစ်တာပါ…၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မောင်စိတ်နှစ်မစိတ်နဲ့ ၅၂၈လို အချစ်မျိုးပဲ ကောင်းပါတယ်…” စသဖြင့် ပြောဆိုနေကြတာတွေပါ။ လူအတော်များများက မိဘနဲ့ သားသမီးကြား၊ ဆရာနဲ့တပည့်ကြား၊ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မတွေကြားမှာထားတဲ့ အချစ်ဟာ အပြစ်ကင်းတဲ့ ၅၂၈ အချစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ ထင်နေကြပြီး ချစ်သူသမီးရည်စားတွေရဲ့ အချစ်မျိုးကတော့ ၁၅၀၀ အချစ်လို့ နားလည်နေကြပါတယ်။ ဒါဟာ လွဲနေပါတယ်။ အများထင်နေသလို မိဘက သားသမီးကို ချစ်တဲ့အချစ်၊ ဆရာက တပည့်အပေါ်ထားတဲ့ အချစ်၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မတွေရဲ့ အချစ်တွေဟာ ၅၂၈ အချစ်မျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်တော့ ၅၂၈အချစ် တစ်နည်းအားဖြင့် ၅၂၈ မေတ္တာဟာ ဖြူစင်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက်ကင်းပါတယ်။ မေတ္တာအစစ်ဟာ ကိုယ့်အတွက်မပါဘဲ သူတစ်ပါးကို အကျိုးလိုလာခြင်း သက်သက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီ၅၂၈မေတ္တာဟာ ပို့တိုင်းပို့တိုင်း ကိုယ့်အတွက်မပါ သူတစ်ပါး ချမ်းသာရေး သက်သက်ကိုသာ ရှေ့ရှုပို့သတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖြူစင်တဲ့ မေတ္တာအစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုကြပါစို့ မိဘနဲ့ သားသမီး၊ ဆရာနဲ့တပည့် စသူတို့ကြားမှာ ရှိနေတဲ့ အချစ်မျိုးဟာ ပို့တိုင်းပို့တိုင်း “ငါ့အဖေ၊ ငါ့အမေ၊ ငါ့သား၊ ငါ့သမီး၊ ငါ့ဆရာ၊ ငါ့တပည့်၊ ငါ့အစ်ကို၊ ငါ့ညီ၊ ငါ့အစ်မ၊ ငါ့နှစ်မ”စတဲ့ ငါစွဲများဦးစီးပြီး ပို့သနေတဲ့ မေတ္တာများ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဖြူစင်တဲ့ ၅၂၈မေတ္တာလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ၅၂၈ မေတ္တာကတော့ “သတ္တ၀ါအားလုံး ဘေးရန်ကင်းပါစေ…၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းပါစေ…၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းပါစေ…၊ ချမ်းသာစွာ မိမိကိုယ်ကို ရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေ…”လို့ ပို့သတဲ့ မေတ္တာဖြစ်တဲ့အတွက် ပို့တိုင်းပို့တိုင်း ကိုယ့်အတွက်မပါ၊ ငါစွဲမပါ၊ သူတစ်ပါး ချမ်းသာရေး သက်သက်ပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီငါစွဲမပါ၊ ကိုယ့်အတွက်မပါဘဲ သူတစ်ပါး အကျိုးလိုးလာမှု သက်သက်ရှိတဲ့ မေတ္တာမျိုးကိုသာ ၅၂၈ မေတ္တာလို့ ခေါ်တာပါ။ ဒီနေရာမှာ ၅၂၈ မေတ္တာ ရေတွက်ပုံလေးကို တင်ပြလိုပါတယ်။
ဒီနည်းကတော့ ပုဂ္ဂိုလ် ၁၂ယောက်ကို တစ်ယောက်ချင်း မေတ္တာလေးချက်နဲ့ အရင်ပွားပြီး နောက် အရပ်ဆယ်မျက်နှာနဲ့ ပြန်ပွားပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သဗ္ဗေသတ္တာ (အလုံးစုံသော သတ္တ၀ါတို့သည်) အဝေရာဟောန္တု (ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ)၊ အဗျာပဇ္ဇာဟောန္တု (စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ)၊ အနီဃာဟောန္တု (ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ)၊ သုခီအတ္တာနံ ပရိဟရန္တု (ချမ်းသာစွာ မိမိကိုယ်ကို ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေ)လို့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ချင်းကို ဒီလေးချက်နဲ့ ပွားရပါတယ်။ ဒီနည်းအတိုင်း သဗ္ဗေပါဏာ (အလုံးစုံသော ထွက်သက်ဝင်သက်ရှိသော သတ္တ၀ါများ)၊ သဗ္ဗေဘူတာ (အလုံးစုံသော ထင်ရှားရှိသော သတ္တ၀ါများ)၊ သဗ္ဗေပုဂ္ဂလာ (အလုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်များ)၊ သဗ္ဗေအတ္တဘာဝပရိယာပန္နာ (အလုံးစုံသော အတ္တဘော၌ အကျုံးဝင်သော သတ္တ၀ါများ)၊ သဗ္ဗာဣတ္ထိယော (အလုံးစုံသော မိန်းမများ)၊ သဗ္ဗေပုရိသာ (အလုံးစုံသော ယောက်ျားများ)၊ သဗ္ဗေအရိယာ (အလုံးစုံသော အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များ)၊ သဗ္ဗေအနရိယာ (အလုံးစုံသော ပုထုဇင်များ)၊ သဗ္ဗေဒေ၀ါ (အလုံးစုံသော နတ်ဒေ၀ါများ)၊ သဗ္ဗေ မနုဿာ (အလုံးစုံသော လူများ)၊ သဗ္ဗေ၀ိနိပါတိကာ (အလုံးစုံသော အပါယ်ငရဲကျရောက်သော သူများ) တို့ကိုလည်း တစ်ဦးချင်းကို အဝေရာဟောန္တုစတဲ့ အချက်လေးချက်နဲ့ ပွားများပါက ပုဂ္ဂိုလ် ၁၂ယောက်ဆိုတော့ မေတ္တာ ၄၈ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် အဲဒီ (၁၂)ယောက်ကိုပဲ အရှေ့အရပ်၊ အနောက်အရပ်၊ တောင်အရပ်၊ မြောက်အရပ်၊ အရှေ့တောင်ထောင့်အရပ်၊ အနောက်တောင်ထောင့်အရပ်၊ အရှေ့မြောက်ထောင့်အရပ်၊ အနောက်မြောက်ထောင့်အရပ်၊ အောက်အရပ်၊ အထက်အရပ်ဆိုတဲ့ အရပ်ဆယ်များနှာနဲ့ တစ်ခုချင်း ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း မေတ္တာတစ်ချက်ချင်း ထပ်ပွားများတဲ့အခါ မေတ္တာ ၄၈၀ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အရှေ့အရပ်၌ရှိသော အလုံးစုံသော သတ္တ၀ါတို့သည် ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ..၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ…၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ…၊ ချမ်းသာစွာ မိမိကိုယ်ကို ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ ပွားများပေးရသလိုပေါ့။ ဒီ၄၈၀နဲ့ ခုနက ပုဂ္ဂိုလ်သက်သက် ပွားများခဲ့တဲ့ ၄၈ချက်ပြန်ပေါင်းရင် ၅၂၈ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ (၁၂ x4= ၄၈။ ၄၈ x 10 = ၄၈၀။ ၄၈၀ + ၄၈ = ၅၂၈) ဒီ၅၂၈မေတ္တာကိုပဲ ငါးရာ့နှစ်ဆယ် ရှစ်သွယ်မေတ္တာလို့ ခေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေတ္တာမှာ ပို့သတိုင်း ပို့သတဲ့ ကိုယ့်အတွက်မပါဘဲ ငါစွဲကင်းကာ သူတစ်ပါးအတွက်သာ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တကယ့်ပြူစင်တဲ့ ၅၂၈ မေတ္တာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ ၅၂၈ မေတ္တာကို တစ်လွဲနားလည်ပြီး အသုံးပြုနေသူများ သတိပြု ဆင်ခြင်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
၁၅၀၀ကတော့ မေတ္တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိလေသာပါ။ ကိလေသာဖြစ်တဲ့အတွက် လူအတော်များများ နားလည်ထားသလို သမီးရည်စားအချစ်၊ လင်မယားအချစ်တွေသာ ၁၅၀၀ အချစ်ဆိုတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ရဟန္တာ မဖြစ်သေးသူမှန်သမျှမှာ ဒီကိလေသာက ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိလေသာ အကျဉ်းကတော့ ၁၀ပါးပါပဲ။ အဲဒီဆယ်ပါးကို တစ်ခြား စိတ်၊ စေတသိက်၊ ရုပ်တွေနဲ့ မြောက်ပွားလိုက်တဲ့အခါ ၁၅၀၀အထိ ဖြစ်သွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅၀၀ ကိလေသာ ရေတွက်ပုံကို အကျဉ်းသိသာရုံ တင်ပြရရင်… စိတ်၊ စေတသိက် ၅၂၊ နိပ္ဖန္နရုပ် ၁၈၊ လက္ခဏရုပ် ၄ = ပေါင်း ၇၅။ ယင်းသည် အတွင်း ၇၅၊ အပြင် ၇၅ဖြစ်၍ ၁၅၀ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ၁၅၀ ဟာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိ၊ ၀ိစိကိစ္ဆာ၊ ထိန၊ ဥဒ္ဓစ္ဆ၊ အဟိရိက၊ အနောတ္တပ္ပ ဆိုတဲ့ ကိလေသာဆယ်ပါးတွင် တစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်းမှာ ပါဝင်ဆက်စပ်မှုရှိနေတဲ့အတွက် စုစုပေါင်း ၁၅၀၀ဖြစ်ပါတယ်။ (၇၅ x ၂ = ၁၅၀။ ၁၅၀ x ၁၀ = ၁၅၀၀။) အဲဒါကို ၁၅၀၀ ကိလေသာလို့ဆိုတာပါ။ ဒီသဘောက အဘိဓမ္မာ မသင်ဖူးသူတွေအတွက် နားလည်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ သိသာရုံလေးသာ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက ၅၂၈ မေတ္တာနဲ့ ၁၅၀၀ကိလေသာ မလွဲကြဖို့ပါ။ ၅၂၈မေတ္တာကို လူ့လောကမှာ နားလည်အသုံးပြုကြသလို အမှတ်မမှားကြဖို့ပါ။ ငါစွဲရှိနေ၊ ငါ့အတွက်ပါနေသေးတဲ့ အချစ်ဟာ ဖြူစင်တဲ့ ၅၂၈ မေတ္တာအစစ်မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သဘောပေါက်ကြဖို့ပါ။ ဒီလို သဘောပေါက်ပြီး အလွဲတွေကို ဖယ်ကာ အမှန်လေးတွေ ပြင်နိုင်ကြဖို့ အခုလို လွဲနေတာလေးကို တင်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
။ အချိန် 2/20/2010 09:31:00 PM
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ရင်းနှီးမှုရှိနေတဲ့ ဘာသာခြား ဒကာမလေး တစ်ယောက်က ဘုန်းဘုန်းကို မေးမြန်းတိုင်ပင် ဖူးပါတယ်။ အဲဒါက ဒီနေ့ခေတ်စားနေတဲ့ ခွဲစိပ်ပြုပြင်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပါ။ သူမအနေနဲ့ တစ်ခြားသူငယ်ချင်းတွေလိုပဲ စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာပေါ်က အရာလေးတွေကို အထူးသဖြင့် ကြည့်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ သူ့မနှာခေါင်းကို ခွဲစိပ်ပြီး ပြင်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားတဲ့…။ တိုင်ပင်စရာရှားလို့ ဘုန်းကြီးကိုမှ လာတိုင်ပင်ရတယ်လို့။ အမှန်တော့ ဘုန်းကြီးဆို ဗေဒင်တတ်တင်ထင်ပြီး ဗေဒင်မေးချင်တာလဲ ပါချင်ပါမှာပါ။ ခွဲစိပ်လိုက်ရင် မွေးကတည်းက ပါလာတဲ့ ရုပ်အဆင်းကို ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက် လက်ရှိရှိထားတဲ့ ကံကြမ္မာတွေဟာ အဆိုးဘက်ကို ပြောင်းရင်ပြောင်းသွား တတ်တယ်လို့ သူမအမေက ပြောတယ်၊ အဲဒါ အမေပြောတဲ့အတိုင်း ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် ပြောပေးစေချင်တယ်တဲ့။ ပြီးတော့ ခွဲစိပ်ပြီး ပြုပြင်သင့်၊ မသင့်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလည်း အကြံပြုပါတဲ့လေ…။ ဘုန်းဘုန်းဘာပြောရမှာလဲ…။ သူ့ရုပ်သူပြင်တဲ့ဟာ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ “ရုပ်ကိုပဲ ပြင်မနေနဲ့။ စိတ်ကိုလည်း ပြင်ဦး”လို့...။
ဟုတ်ပါတယ်။ ရုပ်ဆိုတာဟာ ဖောက်ပြန်ပျက်ဆီးတတ်တဲ့ သဘောရှိနေတဲ့အတွက် ဖောက်ပြန်တိုင်း၊ ပျက်ဆီးတိုင်း လိုက်ပြီး ပြုပြင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လူ့စိတ်ကလည်း အလိုပြည့်တယ်ဆိုတာ ရှိတာမှ မဟုတ်တာ။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ်ကြည့်ပြီး “အင်း…ငါ့မျက်နှာမှာ ဒါလေးကတော့ ဖျက်နေတယ်၊ ဒါလေးကို ခွဲစိပ်ပြုပြင်လိုက်ရင် အတော်ကြည့်ကောင်းမှာပဲ”ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ပြုပြင်ကြည့်တတ်ကြတယ်။ အဲဒါလေးခွဲစိပ်ပြီး နောက်တစ်ခါ ကိုယ့်မျက်နှာကိုမှန်နဲ့ ပြန်ကြည့်တော့ “အင်း… ဒါလေးပါ ထပ်ပြီး ခွဲစိပ်လိုက်ရင်တော့ ပိုကောင်းမှာပဲ”လို့ အတွေးထပ်ဖြစ် ပြန်ပါတယ်။ ထပ်ဖြစ်တော့ ထပ်ပြင်၊ ပြီးတော့ တစ်ခါပြန်ကြည့် ထပ်တွေ့ပြန်ရော၊ ထပ်တွေ့တော့ ထပ်ပြင်ချင်ပြန်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့၊ ထပ်ကြည့်၊ ထပ်မြင်၊ ထပ်ပြင်သံသရာက မပြီးနိုင်အောင်ကို အလိုမကျ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ စကားစပ်လို့ မျက်နှာကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်လိုက်တာ အကြိမ်ပေါင်း ၅၀အထိ ဖြစ်သွားတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်အကြောင်း သတိရမိပါသေးတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးကြီးက “သူမလည်း ခွဲစိပ်ပြုပြင်ဖို့ စကာစတော့ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ အဆင်မပြေတာ တစ်ခုလောက်ကို ခွဲစိပ်ပြုပြင် ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ စခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်း တစ်ခုပြီးတစ်ခု အလိုမကျမှုတွေ ဖြစ်ဖြစ်လာပြီး အခုလို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် မျက်နှာကြီးနဲ့အတူ အကြိမ်ပေါင်း ၅၀အထိ ခွဲစိပ်ပြုပြင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ဘယ်လောက်ပဲ ပြုပြင်ပြုပြင် အလိုမကျဖြစ်ပြီး ဆုံးနိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း..” စသဖြင့် ခွဲစိပ်ပြုပြင်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သူမအတွေ့အကြုံကို အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြောပြဖူးပါတယ်။
ဒါအမှန်ပါပဲ။ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ သဘောရှိတဲ့ ရုပ်ကိုပဲ လိုက်ပြင်နေလို့ကတော့ အလိုကျနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြိမ်၅၀လည်း မပြည့်နိုင်၊ ၆၀၊ ၇၀ စသဖြင့် ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပဲ ပြင်ပြင် ပြီးမှာမဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အမြဲဖောက်ပြန်နေတဲ့ ရုပ်ကိုပြင်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီတစ်ခုပြင်ပြီးလည်း နောက်တစ်ခုပြင်စရာက ထပ်ပေါ်လာ၊ ထပ်ဖြစ်လာနေမှာပဲ ဖြစ်လို့ပါ။ အရင်းစစ်တော့ အမှန်ကို မမြင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ပြင်ပြီးရင်းပြင်ရင်း ဖြစ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြင်ရမှာက ရုပ်မဟုတ်ဘူး၊ စိတ်လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ကိုပြင်တာထက် စိတ်ကိုပြင်ကြလို့ တိုက်တွန်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ပုထုဇင်တွေဖြစ်လို့ ရုပ်ကလည်း ပြင်နေရသေးတယ်ဆိုရင် ရုပ်ကိုလည်းပြင်၊ စိတ်လည်းပြင်ကြပေါ့လို့ ဆုံးမခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ်။ အပုတ်ကောင် ဖြစ်နေတဲ့ ဒီရုပ်ဟာ နေ့စဉ်ပြင်နေရပါတယ်။ နေ့စဉ်သန့်ရှင်းအောင် လုပ်နေရပါတယ်။ တစ်နေ့မပြင်ရင် တစ်နေ့အနံ့ထွက်နေတာ ဆိုတော့ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း မရိုးနိုင်အောင်ကို ပြင်နေရပါတယ်။ မပြင်ဘဲ ထားမယ်ဆိုရင်လည်း ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှိတဲ့ အပေါက်တွေက ထွက်လာသမျှ အရာဟာ ဘာတစ်ခုမှ ကောင်းတာမရှိတော့ ရွံရှာဖွယ်ပဲ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ဒါကလည်း ဒီရုပ်တရားဟာ အကောင်ပုတ်ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ အသိဉာဏ်ရှိမှ ဖြစ်မှာပါ။ တစ်ချို့ မသိကြတော့ ဒီအပုတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ရုပ်ကောင်ကိုပဲ အဟုတ်ထင်ကာ မာနတွေ ၀င်နေကြပါတယ်။ အပေါ်ယံအရေပြားကို ရွှေအလား ထင်မှတ်ပြီး အမျိုးမျိုးနဲ့ ချယ်သနေကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ပြင်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဒီရုပ်ဟာ သေရင်ထားခဲ့ရမယ့် အကောင်ပုတ်ဆိုတဲ့ အမည်ပညတ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကို မသိတော့ ဟန်ဆောင်မှုများနဲ့အတူ အခိုက်အတန့်သာဖြစ်တဲ့ ပြင်ထားတဲ့ရုပ်အပေါ် အစွဲတရားတွေနဲ့ အလွဲအမှား စိတ်ထားတွေအထိ ဖြစ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ကိုအမှီပြုပြီး စိတ်ပါဒုက္ခ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ရုပ်ကို သန့်ရှင်းအောင် လုပ်နေပေမယ့် စိတ်ကို မသန့်ရှင်းမိကြတော့ အကုသိုလ် အညစ်အကြေးတွေနဲ့ လောဘမျက်နှာ၊ ဒေါသမျက်နှာ၊ မောဟမျက်နှာ၊ မာနမျက်နှာ၊ ဣဿာ၊ မစ္ဆရိယ မျက်နှာတွေအဖြစ် ပြောင်းပြောင်းနေကုန် ပါတော့တယ်။ လှချင်လို့ မျက်နှာကို ခွဲစိပ်ပြုပြင် အလှဆင်ပေမယ့် ပိုပိုလှမလာဘဲ ကိလေသာလွှမ်းတဲ့ မျက်နှာတွေနဲ့ အိုအိုလို့သာ ပိုပြလာပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် လှချင်လို့ ပြင်ကြရင်လည်း ရုပ်ကိုလည်းပြင် စိတ်လည်းပြင်ကြပါလို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်မလှပေမယ့် စိတ်လှနေရင် လူလည်းလှလို့ အခုဘ၀မှာရော သံသရာမှာပါ အလှတရားတွေ ပိုင်ဆိုင်နေရမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြတ်ဗုဒ္ဓကတော့ စိတ်ကို အထူးသတိပြုဖို့ အမြဲမိန့်တော်မူပါတယ်။ စိတ်ကိုပြင်ဖို့ အမြဲတိုက်တွန်းတော် မူပါတယ်။ ရုပ်ကို သန့်ရှင်းအောင် ပြုပြင်ကြသလို စိတ်ကိုလည်း သန့်ရှင်းအောင် ပြုပြင်ကြဖို့ အထူးဟော တော်မူပါတယ်။ ရုပ်မှာ အညစ်အကြေးတွေ စွန်းထင်လာတဲ့အခါ သန့်ရှင်းအောင် ဆေးကြောပေးရသလို စိတ်မှာ အညစ်အကြေးတွေ ဖြစ်ရင်လည်း သန့်ရှင်းအောင် ဆေးကြောပေးကြဖို့ ညွန်ပြတော်မူပါတယ်။ “ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရွှံ့ပေရင် ရေနဲ့ဆေးမှပဲ သန့်ရှင်းသွားတတ်သလို၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အညစ်အကြေးဟာလည်း စိတ်နဲ့ဆေးမှပဲ သန့်ရှင်းနိုင်ကြောင်း..” ဆုံးမတော်မူပါတယ်။ အရင်းစစ်တော့ စိတ်မညစ်စေဖို့ပါပဲ။ စိတ်မှာ အညစ်အကြေးတွေ မဖြစ်ဖို့ပါပဲ။ အကယ်၍ စိတ်မှာသာ အညစ်အကြေးဖြစ်ပြီး စိတ်ညစ်နွမ်းပြီဆိုပါက ရုပ်ကို ဘယ်လောက်ပဲ လှအောင်ပြင်နေပါစေ အကျိုးမပြီး အချည်းနှီးပဲ ဖြစ်နေတတ်ကြောင်း သတိပြုကြဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။ ဗုဒ္ဓစာပေ တစ်နေရာမှာ မြတ်ဗုဒ္ဓက “ခိုးသူတစ်ယောက်သည်၊ ခိုးသူတစ်ယောက်ကို မြင်သော် ပျက်ဆီးအောင်ပြုရာ၏၊ ရန်သူတစ်ယောက်သည် ရန်သူတစ်ယောက်ကို မြင်သော် ပျက်ဆီးအောင် ပြုရာ၏၊ မကောင်းသဖြင့် ထားအပ်သော စိတ်သည်ကား ထိုစိတ်ရှိသူကို ထို့ထက်ပင် ယုတ်ညံ့အောင် ပြုနိုင်၏။” (နန္ဒဂေါပါလက၀တ္ထု)ဟု မိန့်တော်မူပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မကောင်းတဲ့၊ ညစ်နွမ်းတဲ့ စိတ်ဟာ အဲဒီစိတ်ရှိနေတဲ့သူကို အဆိုးဆုံးအထိ ပျက်စီးအောင် ဖျက်စီးတတ်ကြောင်း ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကို ညစ်နွမ်းစေတဲ့ အရာများ အများအပြား ရှိနေပေမယ့် နီဝရဏတရား ငါးပါးကတော့ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို ဟန့်တားနိုင်တဲ့အထိ ညစ်နွမ်းစေ၊ တားမြစ်ပိတ်ပင်စေပါတယ်။ ကာမစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့ ကာမဂုဏ်အလိုဆန္ဒ၊ ဗျာပါဒလို့ခေါ်တဲ့ သူတစ်ပါးကို ပျက်စီးစေလိုမှု၊ ထိနမိဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ လေးလံပျင်းရိထိုင်းမှိုင်းမှု၊ ဥဒ္ဓစ္စကုက္ကုစ္စလိုခေါ်တဲ့ ပြန့်လွင့်မှု နှလုံးမသာယာမှု၊ ၀ိစိကစ္ဆာလို့ခေါ်တဲ့ သို့လောသို့လော သံသယဖြစ်ကာ မဝေခွဲနိုင်မှုများဟာ နီဝရဏတရားများ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီတရားများနဲ့ စိတ်ကို မညစ်နွမ်းရအောင် သတိတရားနဲ့ ပြုပြင်ပေးကြဖို့၊ အကုသိုလ်ဖြစ်စရာ အာရုံများ၊ ကိလေသာဖြစ်စရာ အရာများနဲ့ စိတ်ကို မညစ်နွမ်းရအောင် မမေ့မလျော့တဲ့ သတိတရားနဲ့ ပြုပြင်ပေးကြဖို့ ဆုံးမတော်မူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ကိုပြုပြင်တဲ့အခါ ရေချိုးခြင်း၊ ဆပ်ပြာတိုက်ခြင်း၊ အမွေးနံ့သာများ အသုံးပြုခြင်းစတာတွေနဲ့ ပြုပြင်ပေးကြသလို စိတ်ကိုလည်း သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ ဒါနပြုပေးခြင်း၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများပေးခြင်း၊ ၀ိပဿနာအလုပ် အားထုတ်ခြင်းများနဲ့ ပြုပြင်ပေးဖို့လိုကြောင်း တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ ဒီလို ပြုပြင်ပေးတဲ့အခါ သီလတရားကို ခံတပ်ထားပြီး၊ ဒါနရဲ့ ထောက်ပံ့မှုနဲ့အတူ ပစ္စုပ္ပန် ချမ်းသာရေးအတွက် သမထကို အသုံးပြုကာ သံသရာမှသည် နိဗ္ဗာန်အထိ ရောက်စေဖို့အတွက် ၀ိပဿနာနည်းနဲ့ ပြုပြင်ကြဖို့ ညွန်ပြတော်မူပါတယ်။ ဆိုကြပါစို့ ကိုယ်သန္တာန်မှာ အမြဲကိလေသာ ကာမဂုဏ်အားကြီးတဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်ဖြစ်နေ၊ ဘာလေးပဲမြင်မြင်၊ ဘယ်သူ့ကိုပဲ မြင်မြင် ကာမရာဂစိတ်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အပုတ်ကောင်ကို နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရတဲ့ အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားများတာတို့၊ ထစ်ခနဲဆို စိတ်တိုတတ်၊ စိတ်ဆိုးတတ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်သူ့ကိုပဲ ကြည့်ကြည့် အလိုမကျဘဲ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားများပေးတာတို့ စသဖြင့် ကမ္မဋ္ဌာန်းလေးတွေနဲ့ စိတ်ကို ပြုပြင်ကြည့်ရပါမယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ စိတ်မှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်သမျှပေါ်သမျှကို သတိတရားနဲ့ သိအောင်ကြိုးစားပြီး အဲဒီဖြစ်သမျှ ပေါ်သမျှ အရာတွေကို ဖြစ်စဲဖြစ်ခိုက်၊ ပေါ်စဲပေါ်ခိုက်မှာ မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ စွဲဆောင်မှုနောက်ကို မလိုက်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ကြည့်ရပါမယ်။ ဒါကတော့ ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်မှုနဲ့ပဲ ပြုပြင်ပေးလို့ ရပါမယ်။ ၀ိပဿနာနည်းဟာ ပေါ်ရာပေါ်ရာတွေကို လိုက်လိုက်ပြီး သိမှတ်ပေးရတဲ့ နည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနည်းကို အသုံးပြုပြီး စိတ်ကိုပြုပြင်ပေးကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ စိတ်ကို ပြုပြင်မှု အားကောင်းလာ၊ သတိတရားနဲ့ ဖြစ်သမျှစိတ်ကို သိလာနိုင်၊ စိတ်ရဲ့ ဖြစ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်ကို သိပြီး စိတ်ခေါ်ရာနောက်ကို မလိုက်နိုင်အောင် ပြုပြင်လာနိုင်ပြီ ဆိုရင်တော့ ရုပ်ကိုလည်း ပြုပြင်ပြီး ဖြစ်နေပါပြီ၊ ရုပ်ကိုအစွဲပြုပြီး ဖြစ်လာမယ့် ပြုပြင်စရာတွေကိုလည်း ပြုပြင်ပြီး ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒါကြောင့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နေ့စဉ်နေ့စဉ် ရုပ်ကိုပြင်နေကြသလို စိတ်ကိုလည်း တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ကောင်းတဲ့စိတ်၊ ကိလေသာနည်းတဲ့စိတ်၊ ဒေါသနည်းတဲ့စိတ်၊ မာနနည်းတဲ့စိတ်၊ မနာလိုမှု၊ ၀န်တိုမှု နည်းတဲ့စိတ်လေးတွေ ဖြစ်အောင် မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆတဲ့ သတိတရားနဲ့ ပြုပြင်ပေးကြည့်ကြဖို့၊ စိတ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ အညစ်အကြေးများကို စိတ်နဲ့ပဲ သန့်ရှင်းအောင် ဆေးကြောပြုပြင်ပေးကြဖို့၊ ရုပ်ကိုပြင်ဖို့ အချိန်၊ လူ၊ ငွေ၊ ပစ္စည်းစတာတွေနဲ့ အားစိုက်ကြိုးစား ပြုပြင်ကြသလို စိတ်ကိုလည်း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာသတိတရားများနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်ကာ ပြုပြင်ပေးကြဖို့ ဆုံးမဟောကြား ပေးကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်သင့်တာကတော့ ရုပ်ကိုလည်းပြင် စိတ်လည်းပြင်တတ်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ အားလုံး နာမ်ရုပ်နှစ်သင်း အမြင်ရှင်းအောင် ပြင်နိုင်ကြပါစေ…
။ အချိန် 2/20/2010 08:17:00 AM
စိတ်ပင်ပန်းလို့ စိတ်နွမ်းပြေအောင် တရားတော်တွေနဲ့ စိတ်ပန်းဖြေချင်တယ်ဆိုမှ ဆူနာမီတရားနာမိလို့ အပန်းမပြေတဲ့အပြင် ပိုလို့တောင် နွမ်းနေပါတော့တယ်ဆိုတဲ့ ဒကာလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အသံက နားထဲရောက်လာပြန်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ဓမ္မအနှစ်သာရ သက်သက်တွေကိုပဲရေးပြီး တတ်နိုင်သမျှ နှစ်သက်မှုတွေကို မျှဝေပေးမယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ သူတစ်ပါးကို ဝေဖန်တာ၊ တိုက်ခိုက်တာ၊ ဟိုလူ့အကြောင်းပြောတာ၊ ဒီလူ့အကြောင်း ပြောတာတွေ မလုပ်ဖြစ်အောင်၊ စာဖတ်သူများကို လောကီလောကုတ္တရာ အနှစ်တစ်ခုခုပဲ ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပေမယ့် ခုတလော ဓမ္မစာမျက်နှာတွေမှာ ဆူနာမီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပွဲက နဲနဲဆူလာပြန်တော့ စစ်မှန်တဲ့ အမှန်သစ္စာဘက်က ပူလာရပြန်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်က အင်တာနက်ဓမ္မ စာမျက်နှာအချို့မှာ ဆူနာမီဆရာတော်နဲ့ ဒကာလေးအချို့တို့ အွန်လိုင်းမှာ ဆွေးနွေးမှုများကို တင်ထားတာတွေ့ပြီး သေချာအချိန်ပေး နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အမေးနွားကျောင်းသား အဖြေဘုရားလောင်းလို့ ဆိုတဲ့စကားကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင် ဖြေတဲ့ဘက်က ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘုရားလက်ထက်က တိတ္တိဆရာအချို့ရဲ့ အဖြေလို “ဟုတ်သလားဆို…မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ ဟုတ်တယ်…”ဆိုတဲ့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို အဖြေတွေပဲ နားထောင်လိုက်ရပါတယ်။ တိကျတဲ့ အဖြေမရခဲ့ပါဘူး။ သေချာတာကတော့ ဘုရားဟော စာပေတွေဟာ ဆူနာမီအတွက် ဆူနာမီမုန်တိုင်းနဲ့အတူ ပျောက်ပါသွားနေပြီဆိုတာ သေချာပါတယ်။ သာသနာတော်ရဲ့ အသက်ဖြစ်တဲ့ ၀ိနည်းတော်ကို ထည့်မတွက်ဘဲ ဒါတွေက ပညတ်တွေပါဆိုပြီး အရာရာ ပညတ်နဲ့ပဲ ကိုင်ပေါက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၀ိနည်းဆိုတာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ အာဏာဒေသနာဆိုတာကို မေ့ထားပြီး အာဏာကို တော်လှန်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ သာမန်ပုထုဇင်များမပြောနဲ့ ရဟန္တာမထေရ်များတောင် ၀ိနည်းတော်အတိုင်းမညီရင် အာပတ်သင့်စေလို့ ပညတ်တော်မူခဲ့တဲ့ ဘုရားအမိန့်တော်ကို ပရမတ်တစ်ခုတည်းကိုင်ပြီး အပိုင်ဆန့်ကျင်နေတာဟာ မုန်တိုင်းထက် ကြောက်စရာ ပိုကောင်းနေပါတယ်။ ငါ့တွေ့ငါတွေ့ဆိုပြီး ငါ့နည်းအတိုင်း ငါဟောတာဆိုပေမယ့် ဘုရားသားတော် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဘုရားမျက်နှာကိုတော့ ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘုရားက မလုပ်နဲ့ဆိုတာကိုတော့ မလုပ်ဘဲ လိုက်နာဖို့ လိုပါတယ်။
ခုတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ဘုရားမလုပ်နဲ့ဆိုတာကို မလိုက်နာရုံတင်မကဘူး ဘုရားမလုပ်တဲ့အရာတွေကိုပါ လုပ်နေတာကို သူ့အပြောနဲ့ သူ့အဟော၊ သူ့လုပ်ရပ်တွေက တိုက်ရိုက်ပြနေတာကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ ဘုရားက လွတ်မြောက်မှုအတွက် နည်းပေးလမ်းပြမှုလောက်ပဲ ပြုပြီး လက်တွေ့ကျင့်ကြံမှု အပိုင်းက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်ရမယ်လို့ ဟောထားတာတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ဆူနာမီက တရားအလုပ်ကို ကူလုပ်ပေးနေပါတယ်တဲ့။ ဘေးကနေ သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ လမ်းညွှန်ပေးတာ မဟုတ်တော့ဘဲ တရားအားထုတ်သူတွေကို သူ့အစွမ်းတွေထည့်ပေးပြီး သူရထားတာတွေကို မျှပြီးပေးနေသလို လုပ်နေပါတယ်တဲ့။ သူ့ရဲ့နည်းတွေဟာ ယောဂီများအတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကျင့်ယူရမယ့် အရာကို သူ့အားနဲ့ အချောင်ယူနိုင်အောင် လုပ်ပေးနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့ရဲ့နည်းတွေဟာ အားလုံးပညတ်တွေပဲ၊ အရာရာ ဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီး ဟောပြောနေတာ တွေကြောင့် အယူလွဲနေတဲ့ နတ္ထိက၀ါဒ ဆန်ဆန်ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ သမုတိသစ္စာနဲ့ ပရမတ္တသစ္စာနှစ်မျိုးမှာ ပရမတ္ထသစ္စာက အဓိကကျပေမယ့် ဆူနာမီကတော့ အစွန်းရောက်စေတဲ့အထိ ပရမတ်ကို ဟောပြောနေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ပြီးတော့ အနတ္တ အနတ္တဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တွင်တွင်သုံးပြီး ဘုရားဟောတဲ့ အနတ္တနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး သူတီထွင်ထားတဲ့ အနတ္တတွေနဲ့ သဒ္ဓါလွန်ကဲပြီး ပညာနည်းနေသူများကို ရိုက်သွင်းနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
အဆိုးဆုံးက သူဟောပြောတာတွေကို ဗုဒ္ဓစာပေတွေနဲ့ မညှိတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတွေ့က အရေးကြီးပေမယ့် သဒ္ဓါပညာဝီရိယ အားတွေ ယုတ်လျော့လာနေတဲ့ ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ဗုဒ္ဓစာပေတွေကပဲ စံတစ်ခုအဖြစ် မှန်မမှန်ကို စိစစ်ပေးနိုင်တာကို သူက စာပစ်ပြီး ငါဟစ်နေလေတော့ သူ့ရဲ့ငါတွေ့ဟာ အလွဲလမ်းအတွက် အားကိုးတစ်ခု ဖြစ်နေတာပါပဲ။ မဟာစည်ဆရာတော်ကြီး၊ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး၊ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး၊ ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်ကြီး စတဲ့ သီလသမာဓိပညာ အားကောင်းလှတဲ့ ဆရာမထေရ်ကြီးများပင် စာပေအတိုင်း၊ စာပေနဲ့ညှိပြီး စာပေကို မလွန်စေဘဲ ဟောပြောပေးခဲ့တာ၊ ဟောပြောပေးနေတာတွေကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဆူနာမီက ငါတွေ့တွေနဲ့ စာကိုမေ့နေတာတော့ လိုက်နာကျင့်ကြံသူတွေအတွက် ရင်လေးစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလိုသာ ဆက်ပြီး စာပေကို ပစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သူတီထွင်ထားတဲ့ အယူဝါဒတစ်ခု တည်ထောင်နေသလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သူ့အနေနဲ့ ၀ါဒတစ်ခု တည်ထောင်တာက အရေးမကြီးပါဘူး။ အယူဝါဒမှိုင်းမိလို့ သူ့နောက်ကို လိုက်မိတဲ့ ကျင့်ကြံသူတွေပါ အလွဲလမ်းကို လိုက်မိနေပြီး ဆိုးကျိုးတွေ ကြုံလာတဲ့အခါမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်တစ်ပါးကို ကိုးကွယ်မိလို့ ဒီလိုဖြစ်တာပါလို့ ဆိုလာခဲ့ရင် ဘာသာသာသနာနဲ့ သံဃာ့ဥသျှောင် မထေရ်ကြီးများအထိ ပြောစရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူက၀ါဒတစ်ခု တည်ထောင်ပေမယ့် သူ့ဝါဒကို လိုက်နာသူများအနေနဲ့ ယုံကြည်မှုကို ပညာနှင့်ဆင်ခြင်နိုင်အောင် သတိပြုကြဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။ “ဆရာတစ်ပါး လွဲချော်သွားက တပည့်အများ အပါယ်လား၏..”လို့ ဆိုသလို မဖြစ်ရအောင် ဆရာအနေနဲ့ အလွဲမရှိစေဖို့နဲ့ တပည့်တွေအနေနဲ့လည်း အလွဲမမိဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ထားပါတော့။ ဒီနေရာမှာ သိစေလိုတာက ဟောတာပြောတာ ဖြန့်ဝေတာများဟာ ငါတွေ့ငါတွေ့ ဆိုပြီး ဗုဒ္ဓစာပေတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး မဖြစ်စေဖို့ အဓိကပြောလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးမှုဟာ အဓိကကျပေမယ့် သူတစ်ပါးကို ဟောကြားတဲ့အခါမှာတော့ ဗုဒ္ဓစာပေနဲ့ ညှိပြီး ဟောပြောပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင် ဘုရားသခင်ဆိုရင်တော့ မဆိုလိုဘူးပေါ့။ အဲလိုမှမဟုတ်သေးရင် အမှားတွေ ဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အတွက် ကိုယ့်ဝါဒကို သူများတွေကို ဟောကြားတဲ့အခါ အစွန်းမလွတ်အောင် စာပေနဲ့တိုက်ပြီး ဟောကြားစေချင်တာပါ။ အမှန်တော့ ဗုဒ္ဓစာပေမှာလာတဲ့အတိုင်း သွားတာက အမှားကင်းပြီး အကောင်းဆုံး လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း မြောက်များစွာကတည်းက ဘုရားစာပေအတိုင်း ဟောပြောပို့ချလာခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ကြီးများဆိုရင် ဘယ်သူမှ ဝေဖန်ထောက်ပြစရာမရှိဘဲ အခုချိန်အထိ စင်ပေါ်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကိုယ်ပိုင်ဝါဒတွေနဲ့ ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင် ဖောက်ထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေကြသူများ အနေနဲ့ အထူးသတိပြု သင့်လှပါတယ်။ လိုက်နာကျင့်သုံးသူများ အနေနဲ့လည်း ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတယ်၊ အခိုက်အတန့် သမာဓိနိမိတ်လေးရပြီး ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုရုံနဲ့ တရားတွေ့ပြီလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ကာ ဒီဆရာတော်ရဲ့ အယူဝါဒသာ အမှန်ဆိုပြီး ၀ါဒမှိုင်းမမိဘဲ သဒ္ဓါပညာ ညီမျှစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့ အထူးလိုအပ်လှပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆူနာမီကို အကြောင်းပြုပြီး ဆူလာတာတွေကို ဓမ္မအနှစ်သာရများနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်း ငြိမ်းအေးစေဖို့၊ အမှားနည်းပြီး အမှန်လမ်းကို လျှောက်နိုင်စေဖို့ ဟောပြောသူများနဲ့ လိုက်နာသူများ အနေဖြင့် ဘုရားမျက်နှာကို ကြည့်ပြီး ဘုရားဟောတဲ့ အရာတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး မဟောပြော မပို့ချ၊ မလိုက်နာ မကျင့်သုံးကြဘဲ ငါအသိကို စာပေနဲ့ညှိကာ ဟောပြောပို့ချ၊ လိုက်နာကျင့်သုံးကြပါဟု စေတနာစကားဖြင့် အသိတရား ပါးလိုက်ရပါကြောင်း…
အခြေခံ ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်နည်း (နောက်ဆက်တွဲ - ၂)…
။ အချိန် 2/18/2010 01:43:00 PM
အခြေခံ ၀ိပဿနာ အလုပ်ကို အားထုတ်လို သူများအတွက် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားနေရင်း လှုပ်ရှားမှုများမှ တရားရအောင် အားထုတ်နည်းလေးကို တင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ အချိန်ယူပြီး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်လောက် ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်နေရာလေးမှာကိုယ် ထိုင်ပြီး တရားအားထုတ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ အဲလို ထိုင်ပြီး အားထုတ်တာကိုပဲ ပိုပြီးအားရသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ နာရီဝက် တစ်နာရီစသဖြင့် အချိန်ယူကာ ကြိုးစားမှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ တရားအားထုတ်တဲ့အခါ သမာဓိကို တစ်ဆက်တည်းကျအောင် အားထုတ်နိုင်မှ ကောင်းပေမယ့် အချိန်မရတဲ့အတွက် ရတဲ့အချိန်ကိုယူပြီး ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ အပေါ် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒီလိုသူတွေအတွက် နည်းမှန်လမ်းမှန် ဖြစ်စေဖို့၊ အားထုတ်ချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တာလေးတွေကို သိထားဖို့ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ထပ်ပြီး တင်ပြပေးဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်ပြီး တရားမှတ်တဲ့ ယောဂီများအတွက် အဖြစ်များတာတွေက စိတ်မတည်ငြိမ်ဘဲ ဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်တာ၊ အတွေးပေါင်းစုံ၊ စိတ်ကူးပေါင်းစုံဖြစ်တာ၊ အိပ်ငိုက်တတ်တာ၊ ဟိုနာဒီနာ ဟိုယားဒီယားဖြစ်တာ စတာတွေပါ။ အာနာပါနကို အခြေခံပြီး စမှတ်ပေမယ့် သမာဓိ မရှိဘဲဖြစ်နေတော့ စမှတ်ကာစမှာပဲ စိတ်က လွတ်လွတ်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ထွက်လေ၀င်လေလေးကို တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပဲ မှတ်ရသေးတယ် စိတ်ကအပြင်ရောက်နေပါတယ်။ အပြင်အတွေးတွေ၊ စိတ်ကူးတွေနောက်ကို ပါပါသွားတတ်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ရှေ့မှာလုပ်ရမယ့်၊ လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အလုပ်တွေ၊ အစီအစဉ်တွေရှိနေရင် တရားထိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒါတွေက အရင်ပေါ်လာတော့တာပါ။ တရားထိုင်ရင်း အဲဒီအစီအစဉ်တွေ၊ အလုပ်တွေကို စိတ်ကူးပြီး လိုက်လုပ်နေဖြစ်တာပါ။ ဒါဟာ တရားထိုင်တဲ့အထိ ဒီလုပ်စရာတွေ၊ အစီအစဉ်တွေကို ယူလာလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရားစထိုင်တော့မယ်ဆိုရင် မထိုင်ခင် အတိတ်ကဟာတွေရော နောင်လာမယ့် အစီအစဉ်တွေပါ အားလုံးကို တရားထိုင်တဲ့အခိုက်မှာ မေ့နိုင်အောင် ကြိုးစားခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ရိပ်သာကြီးတွေမှာဆို တရားစခန်းဝင်နေတဲ့ ယောဂီတွေကို အဲဒီကာလမှာ စာအုပ်တောင် ဖတ်မခိုင်းပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင် စာအုပ်ဖတ်ထားတဲ့အခါ တရားထိုင်ပြီဆို အဲဒီ စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေပဲ ခေါင်းထဲမှာရောက်လာပြီး စိတ်ကူးတွေ၊ အတွေးတွေ ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်လို့ပါ။ အကောင်းဆုံးက တရားစထိုင်ပြီဆိုကတည်းက ကိုယ့်စိတ်ကို အဓိဋ္ဌာန်လေးနဲ့ ဒီထိုင်တဲ့ အခိုက်လေးမှာတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး မလွတ်အောင်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ပြီးခဲ့တာတွေနဲ့ မရောက်လာသေးတာတွေကို အားလုံးလစ်လျူရှုပြီး လက်ရှိအခိုက်အတန့်ကိုပဲ သတိကပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
၀ိပဿနာဆိုတာ ပေါ်ရာပေါ်ရာကို လိုက်ပြီး ရှုမှတ်တာလို့ ဆိုပေမယ့် စပြီးတရားအားထုတ်တဲ့ ယောဂီများအတွက်တော့ ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်း လိုက်ပြီး ရှုမှတ်နိုင်ဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။ သတိမနိုင်သေးလို့ သမာဓိ မခိုင်သေးတဲ့အခါ ပေါ်သမျှ၊ ဖြစ်သမျှ အာရုံတွေကို တိုက်ရိုက်လိုက်ပြီး သိနိုင်မှတ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲလှပါတယ်။ ဒီလို အချိန်မှာ ယောဂီများအနေနဲ့ သမာဓိနဲ့ ၀ီရိယကို ညီမျှအောင် သတိနဲ့ ကြိုးစားထိန်းပေးရပါတယ်။ သမာဓိ အားနည်းလို့ စိတ်မတည်ငြိမ်သေးရင် ၀ီရိယကို အားစိုက်ပေးရပါတယ်။ စိတ်လွတ်တာနဲ့ ပြန်ဖမ်းပြန်မှတ်၊ အတွေးတွေ၊ စိတ်ကူးတွေ ၀င်နေတယ်ဆိုတာကို သိတာနဲ့ အမှတ်အာရုံကို ပြန်ယူပြန်မှတ်တဲ့ လုံ့လပြုမှု အကျင့်ကို ထပ်ခါထပ်ခါ အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။ သမာဓိအားနည်းချိန်မှာ ၀ီရိယ အားကောင်းနေဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ တရားရလိုတဲ့ စိတ်ကအားကြီးပြီး မရရအောင် ကြိုးကြိုးစားစား အချိန်ပြည့် လုံ့လပြုပေမယ့် တည်ငြိမ်မှု မရှိတဲ့အတွက် တရားမှတ်ဖို့ ခက်နေတတ်ပြန်ပါတယ်။ သမာဓိမရှိဘဲ ၀ိရိယ အားကောင်းနေပြန်ရင်လည်း စိတ်အစဉ်ဟာ ပြန့်ကျဲနေတတ်ပါတယ်။ တည်ငြိမ်မှု မရှိတဲ့ ၀ီရိယဟာ စိတ်အစဉ်ကို ကစဉ်ကလျား၊ ယောက်ယက်ခပ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရားအားထုတ်တဲ့အခါ သမာဓိမရှိသေးတဲ့အချိန် ၀ီရိယကိုအားပြုကာ သမာဓိရဖို့် ကြိုးစားရင်း သမာဓိနဲ့ဝီရိယကို ညီမျှအောင် သတိနဲ့ထိန်းပြီး အားထုတ်ကြည့်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
တကယ်တော့ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်မှာ သတိပဋ္ဌာန် အားထုတ်နည်းလေးမျိုး ပြထားပေမယ့် စိတ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရုပ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေါ်သမျှအရာတွေကိုသာ သတိနဲ့ကပ်ပြီး လိုက်သိလိုက်မှတ်ပေးနိုင်ရင် ဒီနည်းတွေနဲ့ အမည်တပ်စရာတောင် လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ စိတ်အစဉ်မှာ သတိကပ်ပြီး ထွက်သက်ဝင်သက်ကို ပင်တိုင်ထားလို့ ထင်ရှားရာကို ပြောင်းမှတ်ပေးနေရုံပါပဲ။ စာပေအတိုင်း အမည်တွေ လိုက်တပ်နေစရာ မလိုပါဘူး။ နည်းမှန်လမ်းမှန်သာ မှတ်နေမယ်ဆိုရင် မှတ်နေရင်းနဲ့ သူ့အလိုလို သတိပဋ္ဌာန် ကျင့်စဉ်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက မှတ်နေဖို့ပါပဲ။ တရားအားထုတ်တဲ့ ယောဂီတွေမှာ ထွက်သက်ဝင်သက်လို့ခေါ်တဲ့ အာနာပါနကို အခြေခံထား မှတ်နေတဲ့အခါ ကာယာနုပဿနာ၊ နောက်ပေါ်ရာပေါ်ရာကို ပြောင်းပြောင်းမှတ်တဲ့အခါ ဝေဒနာပေါ်လို့ ခံစားမှုကိုမှတ်ရင် ဝေဒနာနုပဿနာ၊ စိတ်ကူးအကြံအစီ စတာတွေကို လိုက်မှတ်ရင် စိတ္တာနုပဿနာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ နောက်ပိုင်း သမာဓိအားကောင်းလာချိန်၊ ဉာဏ်အစဉ် မြင့်လာချိန်မှာတော့ သဘောတရားကိုမှတ်တဲ့ ဓမ္မာနုပဿနာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သတိတရား လက်ကိုင်ထားပြီး ပေါ်သမျှကိုသာ မလွတ်အောင် လိုက်သိလိုက်မှတ်နေရင် ပြီးတာပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ အဓိကပင်တိုင်ထား မှတ်ပေးရမှာကတော့ အာနာပါနပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တစ်ခြားအာရုံတွေ မပေါ်သေးရင် ထွက်သက်ဝင်သက်ကိုပဲ အလေးထား မှတ်နေရုံပါပဲ။ ဒီလိုမှတ်နေရင်း ခန္ဓာကိုယ် တစ်နေရာရာမှာ ယားယံတာ၊ ပူတာအေးတာ၊ နာတာကျင်တာ၊ ကိုက်တာခဲတာ စတာတွေ ပေါ်လာရင် အာနပါန မှတ်နေတဲ့ အမှတ်အာရုံကို အဲဒီဝေဒနာမှာ ပြောင်းပြီး မှတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဝေဒနာလို့ ဆိုတဲ့အတွက် ခံစားမှုမှန်သမျှကို လိုက်ပြီး မှတ်ရပါမယ်။ တရားမှတ်နေတုန်း ကောင်းတဲ့ခံစားမှု ဝေဒနာပေါ်ရင်လည်း အဲဒီဝေဒနာကို မှတ်ပေးသိပေးနေရမှာ ဖြစ်သလို မကောင်းတဲ့ခံစားမှု ဝေဒနာပေါ်ရင်လည်း အလိုက်သင့် လိုက်သိလိုက်မှတ်ပေးနေရပါတယ်။ ဒါကို မဟာသတိပဋ္ဌာန သုတ်မှာ မြတ်ဗုဒ္ဓက “ရဟန်းတို့… ရဟန်း(ယောဂီ)သည် သုခဝေဒနာ (ချမ်းသာသောခံစားမှု)ကို ခံစားလျင်လည်း သုခဝေဒနာကို ခံစားသည်ဟု သိ၏။ ဒုက္ခဝေဒနာ (ဆင်းရဲသော ခံစားမှု)ကို ခံစားလျင်လည်း ဒုက္ခဝေဒနာကို ခံစားသည်ဟု သိ၏။ အဒုက္ခမသုခဝေဒနာ (ချမ်းသာမဟုတ် ဆင်းရဲမဟုတ်သော ခံစားမှု)ကို ခံစားလျင်လည်း အဒုက္ခမသုခ ဝေဒနာကို ခံစားသည်ဟု သိ၏။ ကာမဂုဏ်နှင့်စပ်သော ချမ်းသာသော ဝေဒနာကို ခံစားလျင်လည်း ကာမဂုဏ်နှင့်စပ်သော ချမ်းသာသော ဝေဒနာကိုိ ခံစားသည်ဟုသိ၏။ ကာမဂုဏ်နှင့်စပ်သော ဆင်းရဲသော ဝေဒနာကို ခံစားလျင်လည်း ယင်းကို ခံစားသည်ဟု သိ၏။ ကာမဂုဏ်နှင့်မစပ်သော ချမ်းသာသော ဝေဒနာကို ခံစားလျင်လည်း ယင်းကို ခံစားသည်ဟုသိ၏။ ကာမဂုဏ်နှင့််မစပ်သော ဆင်းရဲသော ဝေဒနာကို ခံစားလျင်လည်း ယင်းကို ခံစားသည်ဟု သိ၏။ ကာမဂုဏ်နှင့်စပ်သော ဆင်းရဲမဟုတ် ချမ်းသာမဟုတ်သော ဝေဒနာကို ခံစားလျင်လည်း ယင်းကို ခံစားသည်ဟုသိ၏။ ကာမဂုဏ်နှင့်မစပ်သော ဆင်းရဲမဟုတ် ချမ်းသာမဟုတ်သော ဝေဒနာကို ခံစားလျင်လည်း “ကာမဂုဏ်နှင့်မစပ်သော ဆင်းရဲမဟုတ် ချမ်းသာမဟုတ်သော ဝေဒနာကို“ ခံစားသည်ဟု သိ၏။”လို့ ဝေဒနာနုပဿနာ ရှုပွားပုံကို မိန့်တော်မူပါတယ်။
အထက်ပါ ဒေသနာအဖွင့်အတိုင်း ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဟာ အလွယ်တကူ နားလည်ပြီး မှတ်နိုင်ပါတယ်။ တရားအားထုတ်ချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပေါ်လာတတ်တဲ့ ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုမဆို သတိကပ်ပြီး ရှုမှတ်ပေးရပါမယ်။ ဝေဒနာဆိုတာ ခံစားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် မှတ်သိပေးရပါမယ်။ ထွက်သက်ဝင်သက်ကို မှတ်နေရင်း ခန္ဓာကိုယ်တစ်နေရာရာမှာ ယားယံလာတဲ့အခါ အဲဒီယားယံတဲ့ ဝေဒနာကို စိတ်နဲ့အာရုံပြုပြီး ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ခံစားချက်ကို အလိုက်သင့် လိုက်သိနေနိုင်အောင် ကြိုးစားမှတ်ပေးရပါတယ်။ ယားနေတဲ့ ခံစားမှုဟာ ပိုပြီးယားလာရင်လည်း ယားလာနိုင်သလို၊ လျော့သွားရင်လည်း လျော့သွားတတ်ပါတယ်။ တိုးတိုးလျော့လျော့ သူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲ လိုက်သိနေနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ သီးခံနိုင်သလောက် သီးခံပြီး မှတ်ပစ်ပေးရပါမယ်။ ဝေဒနာကို မှတ်တဲ့အခါမှာ အလွယ်တကူတော့ လက်မလျော့ဖို့ လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မကောင်းတဲ့ ဝေဒနာမျိုးဟာ ပိုပိုပြီး ပြင်းထန်လာတယ်လို့ ထင်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါကို အတတ်နိုင်ဆုံး သီးခံပြီး မှတ်ပစ်ပေးရပါမယ်။ အဲလိုမှတ်တဲ့အခါ ပျောက်သွားပြီး တစ်ခြားခံစားမှု ဝေဒနာ မှတ်စရာမရှိသေးရင် ထွက်သက်ဝင်သက်ကို ပြန်မှတ်ပေးပါ။ ဝေဒနာက မပျောက်ဘဲ ပိုပိုပြင်းထန်လာတယ်၊ ဘယ်လိုမှ သီးမခံနိုင်တော့ဘူး ဆိုရင်တော့ ဒေါသအဖြစ်ခံပြီး မမှတ်တော့ဘဲ သူ့ကိုလစ်လျူရှုကာ ထွက်သက်ဝင်သက်ကို ပြန်မှတ်ကြည့်ပါ။ အဲလိုမှ မရဘူးဆိုရင်တော့ အမှတ်သတိနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အနေအထား ပြုပြင်ပြီး ထွက်သက်ဝင်သက်ကို ပြန်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ထွက်သက်ဝင်သက် မှတ်မှုကတော့ ပင်တိုင်အမှတ်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခြားမှတ်စရာ အာရုံမရှိရင် သူ့ကိုပဲ ပြန်ပြန် မှတ်ပေးရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပေါ်သမျှ ဝေဒနာကို မှတ်မှုဟာ ဝေဒနာနုပဿနာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သမာဓိအားကောင်းလို့ ထင်လာတဲ့ ချမ်းသာတဲ့ ခံစားမှု၊ ပေ့ါပါးတဲ့ ခံစားမှု၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ခံစားမှုတွေကိုလည်း ခံစားတဲ့အတိုင်း လိုက်မှတ်ပေးရပါမယ်။ ခံစားလို့ ကောင်းတယ်ဆိုပြီး အဲဒီခံစားမှုမှာပဲ သာယာနေမယ်ဆိုရင် တရားဟာ ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်၊ ဉာဏ်စဉ်အဆင့် မတက်နိုင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးမဆို သတိကပ်ကာ လိုက်မှတ်ကြည့်ပါလို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက အာနာပါနကို ရှုမှတ်လို့ အချိန်အတော်ကြာရင် ပေါ်လာတတ်တဲ့ ခံစားမှု ဝေဒနာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှုမှတ်ရမယ့် ရှုမှတ်ပုံကို ပြောပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် တရားအားထုတ်စ ယောဂီများမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အထိန်းရအခက်ဆုံး တစ်ခုက စိတ်အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပျက်နေမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သမာဓိ ကောင်းကောင်းမတည်သေးတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်မှာ အာရုံအမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အတွေး စိတ်ကူးတွေ ပေါ်တတ်သလို မကောင်းတဲ့ အတွေးစိတ်ကူးတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကာမရာစိတ်တွေ ဖြစ်တတ်သလို ဒေါသစိတ်တွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရာဂစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါ အဲဒီစိတ်ကို မသိဘဲ အာရုံနောက်ကို လိုက်သွားမိရင် တရားအားထုတ်နေရင်းနဲ့ပဲ ကိလေသာတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သတိမပါရင် ရာဂစိတ်အတွေးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို တရားအားထုတ်ရင်း ကာမရာဂစိတ်ဖြစ်တာကို မသိဘဲ အာရုံအစွဲနောက် လိုက်မိသွားလို့ နောက်ဆုံး သုတ်လွတ်တဲ့အထိ ဖြစ်ဖူးတဲ့အကြောင်း အသိယောဂီလေး တစ်ယောက်က လျှောက်ဖူးပါတယ်။ ဒါဟာ စိတ်မှာ ဖြစ်တဲ့ ရာဂစိတ်အတွေး စိတ်ကူးကို သတိမကပ်ဖြစ်ကာ မသိလိုက်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သဘောပါ။ ဒါကြောင့် ဘာစိတ်ဖြစ်ဖြစ် သိအောင်ကြိုးစားဖို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မြတ်ဗုဒ္ဓက စိတ္တာနုပဿနာနဲ့ ပတ်သက်လို့ “ရဟန်းတို့… ရဟန်းသည် ရာဂနှင့်တကွသော စိတ်ကိုလည်း ရာဂနှင့်တကွဖြစ်သော စိတ်ဟု သိ၏။ ရာဂကင်းသော စိတ်ကိုလည်း ရာဂကင်းသော စိတ်ဟု သိ၏။ ဒေါသနှင့်တကွသော စိတ်ကိုလည်း ဒေါသနှင့် တကွဖြစ်သော စိတ်ဟု သိ၏။ ဒေါသကင်းသောစိတ်ကိုလည်း ဒေါသကင်းသောစိတ်ဟု သိ၏။ ထို့အတူ မောဟနှင့်တကွသော စိတ်၊ မောဟကင်းသောစိတ်၊ ကျုံ့သော(သံခိတ္တ)စိတ်၊ ပျံ့သော(၀ိက္ခိတ္တ)စိတ်၊ မဟဂ္ဂုတ် (ရူပအရူပ)စိတ်၊ အမဟဂ္ဂုတ် (ကာမာဝစရ)စိတ်၊ သဥတ္တရစိတ်၊ အနုတ္တရစိတ်၊ သမာဟိတ (တည်ကြည်သော)စိတ်၊ အသမာဟိတ (မတည်ကြည်သော)စိတ်၊ ၀ိမုတ္တ (လွတ်မြောက်သော)စိတ်၊ အ၀ိမုတ္တ (မလွတ်မြောက်သော)စိတ် တို့ကိုလည်း ယင်း၏ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် သဘောအတိုင်း သိ၏။”လို့ စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်ရမယ့်နည်းကို ဟောပြပေးတော်မူပါတယ်။
ဒီဟောကြားချက်အရ တရားအားထုတ်နေချိန် စိတ်မှာ ဘယ်လိုအတွေးစိတ်မျိုး၊ စိတ်ကူးစိတ်မျိုးပဲ ပေါ်လာပါစေ သိအောင်ကြိုးစား မှတ်ပေးရပါတယ်။ အဲဒီစိတ်အစဉ်ကို ဖြစ်တာနဲ့ သိလိုက်ရင် ရှေ့ဆက်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ မသိလို့ အဲဒီစိတ်ရဲ့ စွဲရာနောက်ကို ပါသွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုကြပါစို့ တရားအားထုတ်ရင်း သတိလွတ်ပြီး ရာဂစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါ အဲဒီရာဂစိတ်ဖြစ်တာကို သိလိုက်တဲ့အခါ ဒီရာဂစိတ်က ပျောက်ပြီး သိစိတ်က အစားထိုးသွားပါတယ်။ အဲဒီသိစိတ်ကိုလည်း နောက်စိတ်တစ်ခုခုက သိလိုက်ရင် ရှေ့စိတ်က ပျောက်သွားပါတယ်။ စိတ်ဆိုတာဟာ တစ်သမှတ်တည်း ထိန်းထားလို့ ရတဲ့အရာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ရှေ့စိတ်ကို နောက်စိတ်က လိုက်သိပေးနေတာကိုပဲ သတိရှိနေတာ၊ စိတ်ကိုသိနေတာလို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာ ဖြစ်ပျက်မှု မြန်လွန်းလှတဲ့အတွက် ဒီဖြစ်ပျက်နေမှုကိုပဲ သိနေနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးရပါတယ်။ သမာဓိ အားကောင်းလာရင် တရားအားထုတ်ရင်း စိတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အတွေးစိတ်ကူးတွေကို ကြိုတင်သိလာတတ်ပါတယ်။ အပြင်ထွက်တော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်တာနဲ့ အဲဒီစိတ်ကို ထိန်းလိုက်နိုင်ပါပြီ။ ရှေ့ဆက်ပြီး မတိုးဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒါဟာ စိတ်အစဉ်ရဲ့ ဖြစ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်ကို သိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်မှာ ဘယ်လိုအတွေး စိတ်ကူးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုစိတ်မျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်တာနက်တစ်ပြိုက်နက် သိအောင် ရှုမှတ်ပေးရကြောင်း ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို စိတ်မှာဖြစ်သမျှ ကောင်းတဲ့စိတ်ရော မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုပါ ဖြစ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်မှာ အလိုက်သင့် လိုက်သိပေးနေတာကိုပဲ စိတ္တာနုပဿနာလို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သေချာတာကတော့ ကာယာနုပဿနာ၊ ဝေဒနာနုပဿနာစသဖြင့် အသီးအသီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ အားထုတ်မှုတွေဟာ အာနာပါနကို အခြေခံထား မှတ်နေရင်း စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပေါ်သမျှအာရုံတွေကို လိုက်သိလိုက်မှတ်ပေးရုံနဲ့တင် အလိုလို ဘုရားအလိုကျ အားထုတ်ပြီးသား ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ အာနာပါနကို အလိုက်သင့် လိုက်မှတ်ပေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ကာယာနုပဿနာ ဖြစ်နေပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ ကောင်းဆိုးနှစ်ပါး ဝေဒနာများကို အရှိအတိုင်း ခံစားခိုက်မှာ အလိုက်သင့် လိုက်သိမှတ်ပေးနေချိန်မှာ ဝေဒနာနုပဿနာ ဖြစ်နေကာ စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ အတွေးစိတ်ကူး အကြံအစီစတာတွေကို ရှေ့စိတ်နောက်စိတ် မလွတ်အောင် မှတ်သိပေးနေချိန်မှာ စိတ္တာနုပဿနာဖြစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဖြစ်ခိုက်ပေါ်ခိုက် ဖြစ်စဲပေါ်စဲမှာ သိအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ အချက်တစ်ခုတည်းရဲ့ အားထုတ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တရားအားထုတ်တဲ့ ယောဂီများဟာ ဘာနည်းဘယ်နည်း စတဲ့အမည် နာမတွေနောက် လိုက်မနေကြဘဲ သမာဓိ၊ ၀ိရီယကို မျှတညီညွတ်အောင် သတိတရား လက်ကိုင်ထားကာ ထွက်သက်ဝင်သက်ကို အခြေခံ အမှတ်အဖြစ် ပိုင်နိုင်အောင် မှတ်ယူရင်း ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်မှာ ပေါ်လာသမျှ အာရုံများကို ပေါ်စဲပေါ်ခိုက်၊ ဖြစ်စဲဖြစ်ခိုက်မှာ သိအောင်သာ ကြိုးစားမှတ်နေကြဖို့ပဲ လိုပါကြောင်း အသိပေး တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
။ အချိန် 2/17/2010 12:01:00 PM
Q. (၉)တိုင်း (၉)ဌာန သာသနာပြုတယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။ သီဟိုဠ် သီရိလင်္ကာမှလွဲပြီး တပည့်တော် အခြားနိုင်ငံများ ကိုမရှင်းပါ။ ဘယ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါလားဘုရား။ အရှင်ဘုရား ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ဆုမွန်ချွေလျက်ပါဘုရား…
A. ကိုရင်လေးရဲ့ အမေးအတွက် ပါရာဇိကအဋ္ဌကထာ ပထမအုပ်နှင့် အခြား တရုတ်မှတ်စု၊ အင်္ဂလိပ်မှတ်တမ်း အမျိုးမျိုးတို့နဲ့ ညှိနှိုင်းရေးသား တင်ပြထားတဲ့ ဖျာပုံတိုက်သစ်ဆရာတော် အရှင်သြဘာသာဘိဝံသရဲ့ သုတေသန အဘိဓာန်ကျမ်းကို ကိုးကား၍ သင့်လျော်သလို ဖြေကြားပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအဘိဓာန်ကျမ်းတွင် သာသနာတော် ၂၃၅ခုနှစ်၊ တတိယသင်္ဂါယနာ တင်ပြီးနောက် ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ပွားစေရေးအတွက် ကိုးတိုင်းကိုးဌာန သာသနာပြု စေလွှတ်တော်မူခဲ့တဲ့ နေရာဒေသများကို အသေးစိပ် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အဲဒီအရပ်ဒေသများကတော့
(၁) ကသ္မီရ ဂန္ဓာရတိုင်း
ဟိမ၀န္တာ၏ အနောက်မြောက်ဘက်၊ ပန်ချပ်ပြည်နယ်၏ အရှေ့မြောက်ဘက်စွန်းနှင့် စပ်လျက်ရှိသော ကသ္မီရတိုင်း၊ ယင်း၏အနောက်ဘက် သိန္ဓုမြစ် ခြားလျက်ရှိသော ဂန္ဓာရတိုင်း၊ ဤတိုင်းနှစ်တိုင်းပေါင်းလျက် အာဖဂန်နစ္စတန်ပါဝင်သည့် ဌာနများသို့ အရှင်မဇ္ဈန္တိကမထေရ် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင်သံဃာ လေးပါးတို့ ကြွရောက်ကာ အာသီဝိသောပမသုတ္တန်ကို ဟောကြား သာသနာပြုတော်မူသည်။
အိန္ဒိယပြည်တောင်ပိုင်းရှိ မိုက်ဆိုနယ်၊ ယင်းနယ်၏ မြောက်ပိုင်းရှိ ချီတယ်ရ် စီရင်စု ဌာနများသို့ မဟာဒေ၀မထေရ် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင်သံဃာတော် လေးပါးတို့ ကြွရောက်ကာ ဒေ၀ဒူတသုတ္တန်ကို ဟောကြားလျက် သာသနာပြုတော်မူသည်။
(၃) န၀ါဒါသီ(၀န၀ါသီ) တိုင်း
ဘုံဘေမြို့နယ်၏ တောင်ဘက်ပိုင်း ကာဏာရာနယ်၊ ဟိုက်ဒရဗတ်နယ်၊ အရှေ့ဘက်ပိုင်း ပြည်နယ်တို့သို့ အရှင်ရက္ခိတမထေရ် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင်သံဃာတော် လေးပါးတို့ ကြွရောက်ကာ အနမတဂ္ဂသုတ္တန်ကို ဟောကြေားလျက် သာသနာပြုတော်မူသည်။
ဘုံဘေနယ် အလယ်ပိုင်း ပူနားမြို့စသော နယ်များသို့ အရှင်မဟာဓမ္မရက္ခိတမထေရ် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင် သံဃာလေးပါးတို့ ကြွရောက်ကာ မဟာနာရဒကဿပဇာတ်တော်ကို ဟောကြားလျက် သာသနာပြုတော်မူသည်။
မလ၀ါနယ် အနောက်တောင်ဘက် နရဗဒ္ဓခေါ် နမ္မဒါမြစ်၊ သစ္စဗန္ဓတောင်၊ သုပ္ပရကသင်္ဘောဆိပ်၊ ၀ါဏိဇ္ဇဂါမ စသည့် အရပ်တို့သို့ အရှင်ဓမ္မရက္ခိတမထေရ် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင်သံဃာလေးတို့ ကြွရောက်ကာ အဂ္ဂိခန္ဓောပမသုတ္တန်ကို ဟောကြားတော်မူ၍ သာသနာပြုတော်မူသည်။
အိန္ဒိယပြည်၏ အပြင်ဘက် ပါရှား၊ တူရကီ၊ ဂရိ၊ အီတလီတို့ တည်ရှိရာ ရှေးအမည် သာကလတိုင်းဟု အမည်ရသည့် အရပ်တို့သို့ အရှင်မဟာရက္ခိတမထေရ် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင် သံဃာလေးပါးတို့ ကြွရောက်ကာ ကာဠကာရာမသုတ္တန်ကို ဟောကြားလျက် သာသနာပြုတော်မူသည်။
(၇) ဟိမ၀န္တာတိုင်း (စိနရဋ္ဌခေါ် စိန့်တိုင်း ၅ရပ်)
ဟိမ၀န္တာ၏ အရှေ့ဘက်အရပ်နှင့် မြောက်ဘက်အရပ်ရှိ ခိုတန်၊ ဘူတန်၊ ယရကန်၊ တိဘက်၊ တရုတ်ပြည်တို့သို့ အရှင်မဇ္ဈိမမထေရ် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင် သံဃာတော်လေးပါးတို့ ကြွရောက်ကာ ဓမ္မစက္ကပ၀တ္တနသုတ္တန်ကို ဟောကြား၍ သာသနာပြုတော်မူသည်။
စိန့်တိုင်းကြီး၏ တောင်ဘက် ရှမ်း၊ မြန်မာ၊ မွန်၊ ကရင်၊ ကချင်၊ ကယား၊ ယွန်းယိုးဒယား၊ ကမ္ဘောဒီယား၊ လာအိုစသော လူမျိုးတို့နေထိုင်ရာ အရပ်တို့သို့ အရှင်သောမဏထေရ်၊ အရှင်ဥတ္တရထေရ် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင် သံဃာသုံးပါးတို့ ကြွရောက်ကာ ဗြဟ္မဇာလသုတ္တန်ကို ဟောကြားလျက် သာသနာပြုတော်မူသည်။ ဤနေရာတွင် သုဝဏ္ဏဘူမိအရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာတို့က မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့ကို သုဝဏ္ဏဘူမိဟု ယူဆကြပြီး အိန္ဒယကျောက်စာဌာနကမူ စုမတြာကျွန်းကို သုဝဏ္ဏဘူမိဟု ယူဆကြသည်။
ယခုအခါ သီရိလင်္ကာဟုခေါ်ဆိုကြသည့် သီဟိုဠ်ကျွန်းသို့ အရှင်မဟာမဟန္ဒမထေရ် ဦးဆောင်သော သံဃာတော်များ ကြွရောက်ကာ စူဠဟတ္ထိပဒေါပမသုတ္တန်ကို ဟောကြား၍ သာသနာပြုတော်မူသည်။
။ အချိန် 2/16/2010 06:38:00 AM
တစ်ပိုင်းကြောင် ကျက်စာရရုံနှင့် ခက်ပါလှ သဘောဉာဏ်
ထက်မာန အပြောသန်တယ်၊ ဒေါသမာန်ထူပွား။
စောဒကတုဖက်လာလျှင် သူ့ထက်ငါ ငြင်းတဲ့လူစား။
ဘုရားဟော မြတ်ဓမ္မက္ခခန်ကို တတ်လေဟန်ယောင်ဝါး။
ပရမတ်ပြန် အကြောင်သမားတွေတို့ ထောင်လွှားကြ သူ့ထက်ငါ။
အသိဉာဏ်တစ်ထွာလောက်ကယ်နှင့် ညှာမထောက် ဟောတတ်လှပါ။
ပရိတ်သတ် ထောမနာအောင် စောဒနာဉာဏ် အထောက်တွေနှင့်
ကန်အကြောက် အတင်းမရှောင် ငြင်းကြလူ့ဘောင်။
ပိဋကတ်အစွယ်ထောင်လျှင်၊ အပါယ်ဘောင် ဆင်းရလိမ့်လေး။
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အထပ်ပါ တေးထပ်လင်္ကာကို ငယ်ငယ်စာသင်သား ဘ၀မှစပြီး ယခုတိုင် အလွတ်ရနေ၏။ စာသင်းသားဘ၀တွင် စာမေးပွဲအတွက် ကျက်ရခြင်း ဖြစ်သဖြင့် အဓိပ္ပါယ်လေးနက်မှုကို ကောင်းစွာသဘော မပေါက်ခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန် ပြန်သတိရ ဆင်ခြင်မိသည့် အခါတွင်ကား အဓိပ္ပါယ် ဆိုလိုရင်း လေးနက်မှုရှိသည့်အပြင် ယခုခေတ် အခြေအနေနှင့် ပိုမိုကိုက်ညီနေသည်ကို သတိထားမိ၏။ ယနေ့ခေတ်သည် ဆုတ်ကပ်ခေတ်ဖြစ်သဖြင့် သတ္တ၀ါတို့၏ သဒ္ဓါတရား၊ ပညာတရား၊ ၀ိရိယတရားများလည်း အားနည်း ဆုတ်ယုတ်လာနေ၏။ ယင်းတရားများအစား မောဟတရား၊ မာနတရား၊ ဒေါသအာဃာတ တရားများက ၀င်ရောက်လွှမ်းမိုးထား၏။ ထို့ကြောင့် သတ္တ၀ါတို့သည် မိမိတို့၏ အနည်းငယ် သိရှိမှုအပေါ် မာန်မာနတက်ကာ အရာရာသိနေသကဲ့သို့ နားထင်သွေးရောက် နေကြပေ၏။ ထိုအထဲတွင် ပရိယတ်သမားများ ပါရှိသကဲ့သို့ ပဋိပတ်သမားများလည်း ပါဝင်၏။ ခေတ်စကားနှင့် ပြောရလျှင် စာသမားနှင့် ရိပ်သာသမားများပင် ဖြစ်၏။ စာဖတ်များသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များက စာအသိမျှနှင့် မိမိကိုယ်ကို ပိဋကတ်ဆောင်အဖြစ် အထင်ကြီး နေကြသကဲ့သို့ ရိပ်သာသမားများကလည်း ရိပ်သာအသွားများရုံမျှနှင့် မိမိကိုယ်ကို အရိယာအဖြစ် အထင်ပစ်နေကြတော့၏။ ဤသို့သာ ထင်တစ်လုံးဖြင့် ပြင်မဆုံးအောင် တစ်ထောင်ထောင် ဖြစ်နေကြလျှင် လယ်တီဆရာတော်ကြီး မိန့်တော်မူသကဲ့သို့ အပါယ်ဘောင်သာ ဆင်းရမည့်အနေအထား ဖြစ်နေပေ၏။
“သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို မရသေးသမျှ သတ္တ၀ါတွေဟာ အားလုံးအရူးတွေပဲ” ဟု မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဆုံးမတော်မူသကဲ့သို့ပင် အမှန်သစ္စာကိုသိပြီး အရိယာမဖြစ်သေးသမျှ အားလုံးကိလေသာနွံတွင် နစ်နေတတ်ပြီး အပြစ်တွေနှင့်အတူ အရူးသဖွယ်သာ ဖြစ်နေတတ်၏။ မိမိကိုယ်ကို အသိဝင်ပြီး သတိပြု ဆင်ခြင်နိုင်မှသာ အမှားနည်းနိုင်မည် ဖြစ်သဖြင့် မိမိသိသည့် အနည်းငယ်အပေါ်တွင် အဟုတ်ထင်ပြီး မရှုတ်မိကြရန် လိုအပ်လှ၏။ “ငါသိသည်၊ ငါတတ်သည်၊ ငါတော်သည်“ စသည့် ငါစွဲမာနများဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုမိမိ နားထင်သွေးမရောက်စေရန် သတိဆောင်သင့်လှ၏။ မိမိသည် သဗ္ဗုညုတဉာဏ်ရှင် မဖြစ်သေးသမျှ သို့မဟုတ် သစ္စာလေးပါးကို သိသည့်အရိယာ အဖြစ်သို့ မရောက်သေးသမျှ မိမိသိသည်ဟူသည့် အရာများမှာ လွဲနေနိုင်သေးသည်ကို သတိပြု ဆင်ခြင်သင့်လှ၏။ သတ္တ၀ါများအား ဒုက္ခအပေးဆုံးအရာကား အစအဆုံးမသိဘဲ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် အနည်းငယ်မျှသာ သိသည်ဟူသည့် အရာပင်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားဖူးကြမည် ဖြစ်၏။ အနည်းငယ်သာ သိသည်ကို အများကြီးသိသည်ဟူ၍ မာန်မာန၀င်ကာ မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးနေလျှင် မိမိသန္တာန်တွင်လည်း နောက်ထပ်အသိတရားများ တိုးလာနိုင်မည် မဟုတ်ဘဲ သူတစ်ပါးများအပေါ်တွင်ပါ အထင်သေးနှိမ့်ချမှုများ တိုးလာတတ်သဖြင့် မမေ့မလျော့ကြရန် တိုက်တွန်းကြခြင်း ဖြစ်၏။ အကယ်၍ သတိမဆောင် မာနထောင်ကာ အနည်းငယ်သိရှိမှုအပေါ် တစ်လွဲအထင်ကြီးမိပါက အမှန်လမ်းပျောက်ပြီး အမှားလမ်းလျှောက်မိသဖြင့် အပါယ်အထိပင် ကျရောက်စေတတ်သည်ကို အမြဲနှလုံးသွားထားရန်လိုကြောင်း ဆုံးမတော်မူခြင်း ဖြစ်၏။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ အသိနောက်ကို အကျင့်လိုက်ရန် အထူးလိုအပ်လှ၏။ သိပြီး မကျင့်လျှင်ကား မိမိသိထားသမျှသည် အချည်းနှီးသာ ဖြစ်၏။ စာတတ်ပေတတ် ကျမ်းဂန်တတ်လည်း လက်တွေ့ကျင့်ကြံ အားထုတ်နိုင်မှသာ အမှန်လမ်းကို ရောက်နိုင်သကဲ့သို့ လက်တွေ့ အားထုတ်သူသည်လည်း မှန်ကန်သည့်အားထုတ်မှုဖြင့် လမ်းဆုံးအထိ သွားနိုင်မှသာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်၏။ ပရိယတ်ဆောင်ဖြစ်စေ၊ ပဋိပတ်ဆောင်ဖြစ်စေ မည်သူမဆို အသိရော အကျင့်ပါ ရှိရန်လိုအပ်ပေ၏။ ဟိုမရောက်ဒီမရောက် အနည်းငယ်သာ သိရှိပြီး စာတတ်လည်းမဟုတ်၊ အကျင့်မြတ်လည်း မဟုတ်လျှင်ကား မိမိတို့၏ စာအသိ၊ အကျင့်အသိအနည်းငယ် အပေါ်တွင် မာန၀င်ကာ တစ်လွဲမြင်တတ်ပေ၏။ ထိုသို့ တစ်ပိုင်းတစ်စ အသိမျှဖြင့် စာနှင့်အကျင့်ဟူသော ပိဋကတ်အပေါ် အသိဉာဏ်ချော်ပါလျှင် အခေါ်အဝေါ်မှအစ အတော်ဟန် မကျလှသည်ကို သတိပြုသင့်ပေ၏။
ဗုဒ္ဓလက်ထက်က ပရိယတ်ဆောင် အရှင်နှင့် ပဋိပတ်ဆောင် အရှင်တို့ရှိခဲ့ဖူးရာ ပရိယတ်ဆောင် အရှင်သည် စာသမားဖြစ်သဖြင့် စာနှင့်သာ အချိန်ကုန်နေပြီး အကျင့်ပိုင်းတွင် အားမထုတ်ဖြစ်ဘဲ လွဲမှားနေခဲ့ဖူး၏။ ပဋိပတ်ဆောင် အရှင်သည်ကား အကျင့်ပိုင်းတွင် အမှန်လမ်းကြောင်းဖြင့် အဆုံးတိုင်အောင် သွားခဲ့သဖြင့် ခရီးပေါက်ခဲ့၏။ ထိုနှစ်ပါးအနက် မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ပိဋကတ် အစွယ်ထောင်ခဲ့သည့် ပရိယတ်အရှင်ကို ကဲ့ရဲ့တော်မူခဲ့ပြီး ပိဋကတ် အစွယ်မထောင်ဘဲ အကျင့်မှန်ကိုသာ မှန်လမ်းကြောင်းဖြင့် ခရီးပေါက်အောင် ကျင့်တော်မူခဲ့သည့် ပဋိပတ်ဆောင် အရှင်ကိုကား ချီးကျူးသာဓု ခေါ်တော်မူခဲ့၏။ မြတ်စွာဘုရားရှင်က
“နွားရှင်တို့အား နွားတို့ကို ရေတွက်အပ်နှင်းလိုက်ရသော နွားကျောင်းသားသည် နွားနို့အရသာကို မခံစားလိုက်ရသကဲ့သို့ နိဗ္ဗာန်ရောက်သည်အထိ အကျိုးစီးပွားနှင့်စပ်သော ပိဋကတ်သုံးပုံဟူသော ဘုရားစကားတော်ကို များစွာဟောပြောနေသော်လည်း မကျင့်မကြံ မေ့လျော့ပေါ့တန် နေသူသည် ပြုထိုက်သည်ကို ပြုသည်မမည်။ မဂ်ဖိုလ်အရသာကို မခံစားရ။” “နိဗ္ဗာန်ရောက်သည်အထိ အကျိုးစီးပွားနှင့်စပ်သော ပိဋကတ်သုံးပုံတည်းဟူသော ဘုရားစကားတော်ကို အနည်းငယ်မျှပင် ဟောပြောနေပါသော်လည်း တရားအားလျှော်သော အကျင့်ကို ကျင့်လေ့ရှိသူ ဖြစ်ခဲ့မူကား ရာဂ၊ဒေါသ၊မောဟကို ပယ်ပြီးလျှင် ကောင်းစွာအပြားအားဖြင့် သိသည်ဖြစ်၍ ဤလောက၌ လည်းကောင်း၊ တမလွန်လောက၌ လည်းကောင်း စွဲလန်းမှု မရှိတော့ပြီ။ ထိုသူသည်သာ မဂ်ဖိုလ်အရသာကို ခံစားရ၏။” (ဓမ္မပဒ၊ ဒွေသဟာယက ဘိက္ခုဝတ္ထု) ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဘုရားရှင်၏ အထက်ပါ မိန့်ဆိုချက်တွင် ပိဋကတ်အစွယ် မထောင်ကြရန်နှင့် အသိနောက် အကျင့်လိုက်ကြရန် မိန့်တော်မူလိုရင်း ဖြစ်၏။ အကျင့်ကျင့်ရာတွင်လည်း တစ်ပိုင်းတစ်စမဟုတ်ဘဲ အမှန်လမ်းဖြင့် အဆုံးထိအောင် လိုက်နာကျင့်ကြံကာ မဂ်ဖိုလ်ရသည်အထိသွားရန် ဆိုလိုရင်းဖြစ်၏။ စင်စစ် စာပေအားသန်သူဖြစ်စေ၊ အကျင့်အားသန်သူဖြစ်စေ မာနမထောင်ကြဘဲ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ ခရီးဆုံးအောင် အမှန်လမ်းသို့ လျှောက်လှမ်းကြရန်သာ လိုရင်းဖြစ်ပါ၏။ အသိနှင့်အကျင့်ကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချရန်သာ ဖြစ်ပါ၏။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ စာသမားသည်လည်း မိမိသိသမျှ အနည်းငယ်ကို ကိုင်စွဲ၍လည်းကောင်း၊ အကျင့်သမားသည်လည်း မိမိကျင့်သည့် အနည်းကို ကိုင်စွဲ၍လည်းကောင်း ဟောပြောပို့ချ ငြင်းခုံကြလျှင် အကျိုးမပြီး အချည်းနှီးဖြင့် နိဗ္ဗာန်နှင့်ဝေးကာ အပါယ်ဘေးသာ ရွေးနေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေတတ်ပါ၏။ ထို့ကြောင့်လည်း အသိနှင့်အကျင့် တစ်ထပ်တည်းကျပါစေဟု ဆိုကြခြင်း ဖြစ်ပေ၏။
စာရေးသူတို့ ငယ်စဉ် စာသင်သားဘ၀က ဆွမ်းခံကြွသည့် အိမ်တစ်အိမ်တွင် ဒကာကြီး တစ်ယောက်ကို အထူးသတိပြုခဲ့ဖူး၏။ သတိပြုသည်ဆိုသည်ထက် သူနှင့်မတွေ့အောင် ရှောင်ခဲ့ခြင်းဆိုက ပိုမှန်မည်ဖြစ်၏။ ထိုဒကာကြီးသည် ပညာတတ်၊ စာတတ်ပေတတ် ဖြစ်ပေ၏။ သို့သော် ပညာအားကောင်းပြီး သဒ္ဓါအားနည်းသူ ဖြစ်နိုင်၏။ အိမ်ဆွမ်းခံကြွသည့် စာသင်သားငယ်လေးများကို ရှိခိုးခြင်းမရှိ ဆွမ်းလောင်းခြင်း မရှိသည့်အပြင် သူသိသမျှ ပိဋကတ်များ၊ လောကီစာပေများဖြင့်သာ စာရေးသူတို့ကဲ့သို့ စာပေသင်ကြားစဲ စာသင်သားငယ်များအား မေးခွန်းပေါင်း မြောက်မြားစွာကို မေးလေ့ရှိ၏။ သူ့စိတ်တွင် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက် ရှိသည်ကို မသိနိုင်သော်လည်း စာရေးသူတို့ စာသင်းသားငယ်များကား တဖြည်းဖြည်း သူ့ကိုကြောက်လာ၏။ သူနှင့်မတွေ့ရအောင် ရှောင်နေမိကြ၏။ လေ့လာသင်ယူခါစ စာသင်ငယ်များအတွက် သူ့မေးခွန်းများသည် ခြိမ်းခြောက်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေ၏။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုဒကာကြီးကို ကြောက်သဖြင့် ၎င်းအိမ်သို့ ဆွမ်းခံပင် မကြွဖြစ်တော့ပေ။ ယခု ပြန်စဉ်းစားမိသည့်အခါ ဒကာကြီးသည် စာတတ်ပေတတ် ကျမ်းဂန်တတ်သော်လည်း ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုအပိုင်း မရှိသည်ကို စဉ်းစားမိ၏။ သိပြီးအကျင့်မပါလျှင် သဒ္ဓါတရားပါ ခေါင်းပါးသွားတတ်၏။ သဒ္ဓါခေါင်းပါးပြီး ပညာအားကောင်းလျှင် စဉ်းလဲကောက်ကျစ်တတ်၏ဟု ဆိုသကဲ့သို့ပင် ထိုဒကာကြီးသည် တစ်ပါးသူများအပေါ်တွင် ပညာအမျိုးမျိုးစမ်းကာ ဒုက္ခပေးတတ်ကြောင်းကို ယခုအချိန်တွင် ကောင်းစွာသဘော ပေါက်ခဲ့မိတော့၏။
တစ်ခါ ဒကာမကြီး တစ်ယောက်ကိုလည်း ကြုံဖူးပါ၏။ ဒကာမကြီးသည် ရိပ်သာတရားစခန်းများကို အမြဲမပြတ်ဝင်နေသူ ဖြစ်၏။ စာသင်သားဘ၀ စာရေးသူကိုတွေ့တိုင်း ရိပ်သာဝင်ရန်သာ ပြောပြောနေတတ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ ဒကာမကြီးက “အရှင်ဘုရား စာတွေကြီးပဲ သင်မနေနဲ့ တရားလည်းအားထုတ်ဦး အရှင်ဘုရားတို့ စာဘယ်လောက်ပဲတတ်တတ် တရားအားမထုတ်ရင် အလကားပဲ…” စသည်ဖြင့် ပြောတတ်၏။ ဒကာမကြီးစကားသည် မှန်ပါ၏။ စာလည်းတတ် အကျင့်ပါမြတ်လျှင်ကား အထူးပြောစရာမရှိ ပြည့်စုံနေပါ၏။ သို့သော် ထိုစကားပြောသော ဒကာမကြီးကိုယ်တိုင်ကား “ရိပ်သာသာ ၀င်နေသော်လည်း အိမ်ပြန်ရောက်လျှင်ကား အပြောကြမ်း၊ နှုတ်ကြမ်းဖြင့် အမူအရာက နူးညံ့မှုမရှိကြောင်း၊ ရိပ်သာသွားတာလည်း သွားတာပဲ ရှိပြီး ပြန်လာလျှင် ဘယ်ယောဂီက ဘယ်လို၊ ဘယ်ဆရာတော်က ဘယ်လို၊ ဘယ်ဓမ္မကထိကက ဘယ်လို၊ ဘယ်ကိုယ်တော်က ဘယ်လိုအသံကောင်းတာ၊ ဘယ်ကိုယ်တော်က အနေအထိုင် ဘယ်လိုဖြစ်တာ စသည်ဖြင့် အတင်းပေါင်းစုံကိုသာ ပြောနေတတ်ကြောင်း” မိသားစုဝင်များက စာရေးသူကို ပြန်ပြောပြ၏။ သို့ဆိုလျှင် အကျင့်အားသန်သည့် ထိုဒကာမကြီးသည် အနည်းငယ် လွဲနေပေ၏။ အကျင့်ကို ပညာသိဖြင့် သိနေမှုမှ အနည်းငယ် သွေဖီနေ၏။ လက်တွေ့ကျင့်ကြံမှုသည် အလွန်အရေးပါသော်လည်း ထိုကျင့်ကြံမှုကို အမှန်လမ်းကြောင်းဖြင့် ခရီးဆုံးအောင် မသွားနိုင်လျှင် ဟိုမရောက်ဒီမရောက် ဖြစ်နေတတ်၏။ ရိပ်သာမသွားခင် အမူအကျင့်များနှင့် ရိပ်သာမှပြန်လာသည့် အမူအကျင့်များသည် ကွာခြားနူးညံ့နေသင့်သော်လည်း ဒကာမကြီးကား ဒုံရင်းဒုံရင်းသာ ဖြစ်နေသည့်အပြင် မိမိ၏အနည်းငယ်သိမှုကို အားလုံးသိနေသယောင် မာန်ထောင်နေသကဲ့သို့ ရှိပေ၏။ ထိုသို့ အနည်းငယ်သိမှုများဖြင့်သာ ပဋိပတ်အကျင့် မာန်ထောင်နေလျှင် အပါယ်ဘောင်ကို ရှောင်နိုင်ရန်မှာ ခက်ခဲနိုင်ပေ၏။
အချုပ်ဆိုရသော် သညာသိနှင့် ပညာသိ၊ သို့မဟုတ် စာအသိနှင့် အကျင့်အသိ၊ သို့မဟုတ် လေ့လာသိနှင့် ကျင့်ကြံသိများသည် နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြင့် သိထားရန် လိုအပ်၏။ ပိဋကတ်စာပေနှင့် လောကီပညာရပ်များကို ကောင်းစွာသိရှိနေရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်ဘဲ ထိုအသိနောက်ကို အကျင့်ပါလိုက်ရန် လိုအပ်လှ၏။ အကျင့်အားသန်သဖြင့် အကျင့်ကိုသာ ကြိုးစားအားထုတ်ရာတွင်လည်း နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြင့် အကျင့်မှန်ရန် လိုအပ်လှ၏။ တစ်ပိုင်းတစ်စ အကျင့်မျှဖြင့် မှန်ပြီဟု ယူဆကာ အဟုတ်မထင်ရန် သတိပြု ဆင်ခြင်သင့်လှ၏။ ထိုသို့ မဟုတ်လျှင် စာသမားလည်း အကျင့်မပါလျှင် မာန်ထောင်မိတတ်သကဲ့သို့ အကျင့်သမားသည်လည်း စာအသိမရှိ၊ အကျင့်မမှန်လျှင် အဆုံးမရောက်ဘဲ တလွဲမာန ၀င်တတ်လှ၏။ ထိုသို့ အသိရောအကျင့်ပါ အနည်းငယ် သိကျင့်သည်လေးများဖြင့် အဟုတ်ထင်ကာ မာန၀င်မိပါက အမှန်မနီး အချည်းနှီးဖြင့် ဆင်းရဲအတိ ဖြစ်ကာ အပါယ်အထိပင် သက်ဆင်းနိုင်တတ်ပေ၏။ ထို့ကြောင့် ပိဋကတ်အစွယ် မထောင်ဘဲ အပါယ်ဘောင်မှ ရှောင်နိုင်ကြစေရန် အသိနှင့်အကျင့် ထပ်တူဆင့်ရန် ကျင့်ကြံအပ်ပါကြောင်း…
။ အချိန် 2/13/2010 06:16:00 AM
။ အချိန် 2/11/2010 04:13:00 PM
ခလုပ်ထိမှ အမိတ နေသူများကို တွေ့ရတိုင်း ခလုပ်မထိခင် တ,ကြရင် မကောင်းဘူးလားလို့ ကလေးကလား အတွေးပွားမိပါတယ်။ ပုထုဇင်တွေရဲ့ သဘာဝအတိုင်း သတ္တ၀ါတွေဟာ ဆင်းရဲဒုက္ခ မရောက်သေးရင်၊ ဘေးဒုက္ခမကြုံသေးရင် အားကိုးရာကို မရှာတတ်ကြသေးပါဘူး။ ဒုက္ခတွေကြုံ ဆင်းရဲတွေစုံမှပဲ ကယ်တင်ရှင်ကို ရှာတတ်ကြပါတယ်။ အရှင်းပြောရရင် သေဘေးနဲ့ကြုံကာ သေရတော့မယ်ဆိုမှ အသေကောင်းအောင် လုပ်ချင်တတ်ကြပါတယ်။ အားရှိနေတုန်း၊ အချိန်ရှိတုန်း၊ လုပ်နိုင်နေတုန်း ကြိုးစားရဖွေရမှာကို ဘေးဒုက္ခကြုံမှ ရှာနေကြတော့ အားအင်ကုန်ခမ်းပြီး အားကိုရာက မစွမ်းဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ မရတော့မှ အားကိုးရှာတော့ ရှာသလို မရ၊ တ,သလိုမရ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှာတယ်၊ တ,တယ်ဆိုတာကလည်း ရှာလို့ရချိန်၊ တ,လို့ရချိန်၊ ရှာနိုင်တ,နိုင်ချိန်မှာ ရှာတာ၊ တ,တာကောင်းတယ်လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစကားပုံအတိုင်း ပြောရရင်တော့ ခလုပ်ထိမှ အမိတမနေဘဲ ခလုပ်မထိခင် အမိတတာက ပိုကောင်းပါတယ်ပေါ့။
“သတ္တ၀ါတွေဟာ ဘေးဖြစ်မှပဲ ကိုးကွယ်ရာကို ရှာတတ်ကြတယ်”လို့ ဆိုသလိုပဲ သူသူကိုယ်ကိုယ် သေဘေးနဲ့ မကြုံသေးရင် မကြောက်တတ်ကြပါဘူး။ တကယ့်ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သေရတော့မယ်ဆိုတာကို မသိသေးရင် ဘယ်သူတွေ ဘာပဲပြောပြော ဘယ်လောက်ပဲ ဆုံးမဆုံးမ မလိုက်နာကြ၊ မဆင်ခြင်ကြပါဘူး။ သူတော်ကောင်းများ၊ အတွေ့အကြုံရှိသူများက မကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်များ၊ မကောင်းတဲ့ အနေအထိုင်၊ အပြောအဆိုများကို ဆင်ခြင်ကာ ကောင်းတာတွေနဲ့နေဖို့ ဘယ်လောက်ပဲပြောပြော၊ ဘ၀ရဲ့ အားကိုရာကိုရှာဖို့ ဘယ်လိုပဲ ဆုံးမဆုံးမ တကယ်လက်တွေ့ သေရလောက်မယ့် အဖြစ်မျိုးနဲ့ မကြုံသေးရင် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ မကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေ အပေါ်မှာ မရှောင်ကြဉ်ကြ၊ မဆင်ခြင်ကြသေးပါဘူး။ ဘုန်းဘုန်းကိုယ်တိုင်လည်း အသောက်အစား၊ အလောင်းအစား လုပ်နေကြတဲ့သူတွေကို တွေ့တိုင်း မလုပ်ကြဖို့၊ ရှောင်ကြဉ်ကြဖို့ ပြောဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကတော့ သေလုမျောပါး မဖြစ်သေးလို့လား မသိဘူး သောက်မြဲ ကစားနေကြမြဲပါပဲ။ သူတို့ရှေ့မှာ ဒီအသောက်အစား၊ အလောင်းအစားတွေကြောင့် ဒုက္ခဖြစ်သွားကြတဲ့ သူတွေကို တွေ့နေရပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အဆိုးဆုံး မဖြစ်သေးလို့နဲ့တူတယ် မရှောင်ကြဉ်ကြပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်တောင် သူတို့တွေကို ပြောဆိုဆုံးမပေးဖို့ အားလျော့လာပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် မရှောင်ကြတော့ ကြာရင်ပြောတဲ့သူတောင် အပြစ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အပြစ်ဖြစ်တာထက် သူတို့ပါ အပြစ်ဖြစ်လာမှာကို စိုးမိပါတယ်။ ကွယ်ရာမှာ နောက်သလို ပြောင်သလိုပြောကြရင်း ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံ အပြစ်တွေ ဖြစ်မှာစိုးမိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရသလောက်တော့ ပြောဆိုဆုံးမကြည့်ရမှာပါပဲလို့ အားတင်းထားရပါတယ်။
ထားပါတော့။ ပြောချင်တာက ပုထုဇင်တွေဟာ မကောင်းတဲ့အလုပ်၊ မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်နေကျင့်နေတယ်ဆိုတာ သိကြပေမယ့် ဒီလုပ်ရပ်တွေကြောင့် သေလုမျောပါးဖြစ်တဲ့အထိ ဆင်းရဲဒုက္ခ မတွေ့ကြသေးရင် ရှောင်ကြဉ်ကြဖို့ တော်တော်ခဲရင်းတယ် ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သေရမယ့်အထိ ခလုပ်မထိသေးရင် ဘ၀ရဲ့ အမိသဖွယ်ဖြစ်တဲ့ အားကိုရာအမှန်ကို မရှာကြ၊ မတ,ကြသေးဘူးဆိုတာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ သေရတော့မယ်ဆိုတာသိလို့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ၊ တရားဘာဝနာ အားထုတ်မှုတွေ လုပ်နေတဲ့သူတွေတောင် တရားအရှိန်ကြောင့် အခုချက်ချင်း မသေတော့ဘူးဆိုတဲ့ အခါ “ငါမသေနိုင်သေးပါဘူး”ဆိုပြီး အားထုတ်မြဲအကျင့်၊ ပြုလုပ်မြဲ အလုပ်တွေကို လျော့ပစ်တတ်ကြပါသေးတယ်။ အချိန်အကန့်အသတ်ပဲ နေရတော့မယ့် ရောဂါကို ခံစားရမှပဲ အားကိုရာ ဘာသာတရားကို ဖိလုပ်ဖြစ်ရာမှ ဒီရောဂါက သက်သာလာပြီး ထင်သလို သတ်မှတ်ချိန်မှာ မသေတော့ဘူးဆိုတဲ့ အခါ ဘာသာတရား အားထုတ်မှုကို လျော့ချတတ်ကြပါတယ်။
အသိဒကာမလေး တစ်ယောက်က သူ့ကိုယ်တွေ့ကို ပြောဖူးပါတယ်။ သူ့မှာ သေရတော့မယ့် ကင်ဆာရောဂါ တစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ သေရမယ်ဆိုတာသိတော့ အရမ်းကို ကြောက်သွားပြီး ရိပ်သာမှာ ကြိုးစားပမ်းစား တရားအလုပ် အားထုတ်ဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်တော့ အဲဒီကင်ဆာ ရောဂါဟာ ဆေးအရှိန်တွေရော တရားအရှိန်တွေကြောင့် ထင်ပါတယ် မပြန့်ပွားတော့ပဲ ဒီကင်ဆာကြောင့် မသေရတော့ဘူးဆိုတာ သိရတော့ လုပ်နေကြ တရားအလုပ်အပေါ် စိတ်မပါဖြစ်လာပြီး အရှိန်တွေ လျော့လာဖူးကြောင်း၊ ချက်ချင်းပဲ သေရတော့မလို ဖြစ်တုန်းက ဘာသာတရားအလုပ်ကို အားကိုးတကြီးနဲ့ ရှာခဲ့ပေမယ့် ဒီရောဂါက ဆက်ပြီးမပြန့် ပွားတော့ဘူးဆိုတော့ တရားအားထုတ်မှုမှာ အားလျော့လာပြီး သေရမှာကို မေ့လာမိကြောင်း စသဖြင့် သူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ခံစားချက်ကို ပြောပြဖူးပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ပုထုဇင်တွေရဲ့ စိတ်အစဉ်ဟာ ဒီလိုပါပဲ တကယ် သေလုမျောပါး မဖြစ်သေးရင် မကြောက်ကြသေးပါဘူး။
ဒကာမလေးရဲ့ ကိုယ်တွေ့လေးကို နားထောင်ပြီး သေခြင်းတရားရဲ့ ကြောက်စရာကောင်းပုံကို ကောင်းကောင်းသဘော ပေါက်သွားပြီး လွတ်မြောက်ရာကို ရှာသွားခဲ့သူ၊ ခလုပ်မထိခင် အမိတသွားခဲ့သူ တစ်ယောက်အကြောင်း သတိရမိလိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်းမှာ အလွန်ထင်ရှားတဲ့ အသောကခေါ် သိရီဓမ္မာသောကမင်းကြီးရဲ့ ညီတော် တိဿပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ညီတော်တိဿဟာ အသောကမင်းကြီးရဲ့ သာသနာအပေါ် ချီးမြှောက်မှုတွေ၊ ရဟန်းသံဃာတော်များကို လိုလေသေးမရှိ လှူဒါန်းထောက်ပံ့မှုတွေကို ကြည့်ပြီး “အင်း… သံဃာတော်များနယ် တယ်ဇိမ်ကျလှပါလား၊ စာဖို့းသောက်ဖို့ ၀တ်ဖို့အတွက် မပူရတဲ့အပြင် အကောင်းစားတွေပဲ သုံးဆောင်နေရတော့ စည်းစိမ်ယဇ်နေကြမှာပဲ…” စသဖြင့် မကြားတကြား ရွဲ့သလို စောင်းသလို ရေရွတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီစကားကို အသောက မင်းကြီးကြားတော့ သူ့ညီကို ခေါ်ပြီး “ကဲ…ညီတော် မင်းကို ဒီနေ့ကစပြီး ရှင်ဘုရင် ရာထူး (၇)ရက်ပေးမယ်၊ ဘုရင်အဖြစ်နဲ့ မင်းကြိုက်သလို တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ပြီး မင်းစည်းစိမ်ကို ခံစားပါ၊ ဒါပေမယ့် (၇)ရက်ပြည့်ပြီးရင်တော့ မင်းကိုသတ်မယ်…”ဆိုပြီး မင်းရာထူး၊ စည်းစိမ်ကို ပေးလိုက်ပါတယ်။ ညီတော် တိဿဟာ ရှင်ဘုရင်အဖြစ်နဲ့ မင်းစည်းစိမ်တွေကို ရရှိခံစားနေရပေမယ့် (၇) ရက်ပြည့်ပြီးရင် သတ်မယ်ဆိုတဲ့ သေခြင်းတရားက ရှိနေလေတော့ ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ အပေါ်မှာ မခံစားနိုင်၊ မပျော်ပိုက်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ တစ်ရက်ကုန်မှာကို ကြောက်နေပါတော့တယ်တဲ့။ သေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိက သူ့ကိုအကြောက်တရားတွေနဲ့ လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက် ဘာကိုမှ မခံစားချင်တော့ဘူးတဲ့လေ။ ဒီတော့မှ အသောကမင်းကြီးက သူ့ညီကို “လွတ်မြောက်ရာ၊ သေခြင်းကင်းရာကို ရှာနေကြတဲ့ ဒီသာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းသံဃာတော်များဆိုတာ သေခြင်းတရားကို အမြဲနှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်နေတဲ့အတွက် မင်းပြောသလို စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေမှာ ဇိမ်မယဇ်နိုင်တဲ့အကြောင်း” ပြောဆိုဆုံးမလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ညီတော်တိဿဟာ လောကီစည်းစိမ်တွေ ပစ်ပြီး သာသနာ့ဘောင်သို့ အပြီးဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ မှန်ပါတယ်။ ညီတော်တိဿရဲ့ အဖြစ်ဟာ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ သေရမယ်ဆိုတဲ့ အသိကရှိနေတော့ မပျော်နိုင်မပါးနိုင်တဲ့ အဖြစ်ပါ။ သူဟာ သေခြင်းတရားကို ကောင်းစွာသဘော ပေါက်သွားသူ၊ ခလုပ်မထိခင် အမိတသူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သူပါ။
တကယ်တော့ သေခြင်းတရားဟာ ဆင်ခြင်ကြည့်ရင် တော်တော်ကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ပုထုဇင်မှန်သမျှ သေရမှာ ကြောက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မသိမှု အ၀ိဇ္ဇာအားကြီးတဲ့ သူတွေကတော့ ဒီသေခြင်းတရားကို မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ နေ့စဉ်သွားလာ လှုပ်ရှားနေပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသေတော့မယ့် သူတွေလိုပါပဲ။ ပေါ့ပေ့ါနေ ပေါ့ပေါ့စားကို ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဆိုးတာက တိုးတက်လှတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နောက်ကိုလိုက်ပြီး စိတ်အလို လိုက်မိနေကြတာတွေပါ။ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ပျက်ပြားပြီး မကောင်းမှု ဒုစရိုက်များနဲ့ ပျော်မွေ့နေကြပါတယ်။ သေခြင်းတရားကို လက်တွေ့မခံစားရသေးတော့ သေရမှာကိုမေ့ပြီး ဖြစ်သမျှအခြေအနေနဲ့ ရသမျှ အနေအထားလေးတွေမှာ နစ်မွန်းနေပါတယ်။ ဒီလိုနေရင်း ရုတ်တရက် သေရမယ့် ဘေးနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့မှ ဟိုတဒီတ ဟိုအားကိုးရှာ ဒီအားကိုးရှာတွေ လုပ်ကုန်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်ရှိတုန်း၊ လုပ်အားရှိတုန်း၊ လုပ်နိုင်နေတုန်း အားကိုးရာကို မရှာမိဘဲ အားအင်ကုန်ခမ်း သေးမယ့်လမ်းရောက်မှ ရှာကြတော့ နောက်ကျကုန်တော့တာပေါ့။ အမိတတယ်ဆိုရင်လည်း ခလုပ်ထိမှ တမနေဘဲ ခလုပ်မထိခင် တမှ အကျိုးရှိပြီး အားပြည့်အင်ပြည့် ကယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ပြောလိုတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသိဝင်ကြဖို့ပါ။ ခလုပ်ထိအောင် စောင့်မနေကြဘဲ ခလုပ်မထိခင် ပြင်ဆင်ကြဖို့ပါ။ အမိတ,ချင်ရင် အမိက မ,နိုင်ချိန်မှာ တ,နိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ပါ။ ခလုပ်ဆိုတာ သွားရင်းလာရင်းနဲ့လည်း အသွားမတော်ရင် အချိန်မရွေး ထိနိုင်တဲ့အတွက် သွားရင်းသွားရင်း အမိမကယ်နိုင်တဲ့ အဝေးရောက်မှ ခလုပ်ထိလို့ အမိတ,မယ်ဆိုရင် အမိလည်း မမ,နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆိုသလို ကိုယ်ထူပြီး ကိုယ်ထမှ ဖြစ်မှာပါ။ အဓိကကတော့ ထိမှတ,တာထက် မထိခင် ကြိုတင်ပြီး မထိအောင် သတိပြုဆင်ခြင်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ သတိထားပြီးနေလို့မှ ခလုပ်ထိလာရင်လည်း ကိုယ်က ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်အောင် ကုသလို့ ရပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ လူ့လောကမှာ သွားလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ လောကသများအနေနဲ့ ခလုပ်ဆိုတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ ဘေးဒုက္ခ၊ သေခြင်းဒုက္ခရောက်လာမှ အားကိုးရာကို ရှာကြတကြတာထက် ဒီအရာတွေ မရောက်လာခင် ကြိုတင်ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေ၊ လုပ်ရပ်တွေကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ကောင်းတာတွေနဲ့ ကာကွယ်ပြင်ဆင်ထားနိုင်အောင် ကြိုးစားတာက ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ ဘေးဒုက္ခကြုံ၊ သေခြင်းနဲ့ကြုံမှ ကိုးကွယ်ရာကို ရှာတာထက် မလာခင် ဆင်ခြင်တာက ပိုပြီးလက်တွေ့ကျကာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင် လေ့ကျင့်ထားချိန်မှာ ရောက်လာလည်းပဲ အဆင်သင့် ခုခံကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သေခြင်းတရားကို ရဲရဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရခဲတဲ့ဘ၀ကို ရရှိထားကြတဲ့ အမြင့်ဆုံး လူသားများအနေနဲ့ အသက်ရှင်စဲအခိုက်မှာ နေချင်သလိုနေ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်ပြီး သေခါနီးမှ သံသရာ ဘ၀ကူးကောင်းရေးအတွက် အားကိုးရာကို ရှာသလိုမျိုး၊ လောကစကားနဲ့ ပြောရရင် ခလုပ်ထိမှ အမိတတာမျိုး မဖြစ်ကြစေဘဲ ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေ ရောက်မလာခင်၊ ခလုပ်မထိခင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်စရိုက်များကို သတိပြုဆင်ခြင်ကာ ကောင်းတဲ့အကျင့် စရိုက်များနဲ့သာ အချိန်ရှိတုန်း၊ အခွင့်သာတုန်း၊ လုပ်နိုင်နေတုန်း ကြိုးစားကြဖို့၊ ခလုပ်ထိမှ အမိမတကြဘဲ ခလုပ်မထိခင် အမိအရ အသိရှိကြဖို့၊ ခလုပ်ထိတဲ့အခါလည်း မကြောက်မရွံ့ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ အထူးတိုက်တွန်းလိုက်ရ ပါတော့တယ်…။ အားလုံး ခလုပ်ထိမှ အမိတကြတဲ့ အဖြစ်မျိုးမှ ကင်းလွှတ်ကြပါစေ…
နဲနဲလေးတော့ လွဲနေတယ် (၃)...
။ အချိန် 2/10/2010 03:48:00 PM
လွဲနေတာလေးတွေ ပြောရင်းနဲ့ နောက်ထပ်အလွဲတစ်ခု ပြောစရာ ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ အဲဒါက စေတီပုထိုးများနဲ့ ဂြိုဟ်တိုင်များကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အများစုဟာ ဘုရားသွားတယ်၊ ဘုရားသွားတယ်နဲ့ တကယ်တော့ ဘုရားသွားပြီး ဘုရားအာရုံပြု ရှိခိုးကြတာထက် ဘုရားရောက်ရောက်ချင်း ဂြိုဟ်တိုင်လိုက်ရှာ နေကြတာတွေပါ။ ကိုယ်မွေးတဲ့ မွေးနေ့အလိုက် လုပ်ထားတဲ့ ဂြိုဟ်တိုင်တွေမှာ သွားပြီးဘုရားကို ရေသွားပက်ကြတာ၊ ခေါင်းပေါ်ကနေ ရေလောင်းပေးကြတာ၊ အမွေးတိုင်း၊ ဖယောင်တိုင်းအစည်းလိုက် မီးရှို့ပြီး ဘုရားကို မီးတိုက်ကြတာတွေဟာ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော် ဖြစ်တဲ့ဘုရားက ဘာမှ မပြောပေမယ့် သက်ရှိသူတစ်ယောက်သာ ဆိုရင် ထရိုက်လိုက်မှာ အမှန်ပါပဲ။
ဘုန်းဘုန်းတို့ကျောင်းက အိမ်တော်ရာ ဘုရားဝင်းထဲမှာ ရှိတော့ ဘုရားလာဖူးတဲ့ သူတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ တွေ့ရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုန်းဘုန်းကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ဖွဲ့ပေးထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးဝတ်အသင်းက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်တိုင်း သန့်ရှင်းရေး လုပ်ကြတဲ့ အခါမှာ အသင်းဝင်အချို့ရဲ့ ဂြိုဟ်တိုင်နားက မခွါနိုင်တာတွေကိုလည်း သတိထားမိပါတယ်။ တံမြက်လှဲ၊ ဘုရားပန်းလဲ၊ ရင်ပြင်သန့်ရှင်းရေးတွေ အားလုံးလုပ်ပြီး ကိုယ့်ဂြိုဟ်တိုင် ကိုယ်သွားကာ ဆောင်းတွင်းမနက် စောစောစီးစီး ဘုရားကို ခေါင်းပေါ်ကနေလောင်းလို့ သက်စေ့ရေပက် နေတာတွေကြောင့် သူတို့ကို ပြောပြရပါသေးတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဆောင်းတွင်းကြီးမှာ ခေါင်းပေါ်ကနေ ရေလောင်းကြည့်ပါလားလို့…။ လွဲနေတာတွေပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အများစုဟာ ဘုရားသွားကြတယ်ဆိုရင် ဘုရားရင်ပြင်တော်မှာ ရှိတဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာစတဲ့ ဆိုင်ရာနေ့နံတွေကို အရောက်သွားကာ ဂြိုဟ်တိုင်မှာရှိတဲ့ ဘုရားရုပ်ပွားနဲ့ ရုပ်ပွားတော်အောက်က နဂါး၊ ဂဠုံ၊ ကျားစတဲ့ သတ္တ၀ါတွေကို အဓိကသွားပြီး သက်စေ့ရေလောင်းနေကြတာ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီအထဲမှာ ပါရင်ပါနေကြမှာပါ။ ပြောတော့ ဘုရားကို သက်စေ့ရေလှူတာတဲ့။ နောက်ဆုံးတော့ ဗေဒင်ဆရာစကားအတိုင်း လိုက်လုပ်နေကြတာတွေပါ။ ဘုရားကို ရေလှူချင်တယ်၊ ရေသပ်ပယ်ချင်တယ် ဆိုရင်လည်း သက်စေ့တွေ ဘာတွေလုပ်မနေနဲ့ပေါ့။ နေ့နံတွေ ဘာတွေရွေး မနေနဲ့ပေါ့။ သင့်လျော်တဲ့ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကို သေသေချာချာ ကျကျနန သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလုပ်ပြီး သက်တော်ထင်ရှား ဘုရားရှင်ကို အာရုံပြုလို့ အပူအအေး သင့်မြတ်တဲ့အချိန်တွေမှာ ရေသပ္ပါယ်သင့်တာပေါ့။ မီးပူဇော်တာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ဘုရားမီးပူဇော်တယ် ဆိုရင်လည်း ဖယောင်းတိုင် သက်စေ့တွေ ဘာတွေလုပ်မနေနဲ့ ဘုရားရှင်ကို မီးမြိုက်သလို မဖြစ်အောင် ခပ်ဝေးဝေးကနေ ထွန်းညှိပူဇော်ကြပေါ့။ မီးပူဇော်တယ်ဆိုတာ အမှောင်ကျတဲ့အချိန်မှာ ဘုရားကို အလင်းရအောင် ညဘက်ပူဇော်တာဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီးလည်း ဘုရားရှေ့နားမှာ ဖယောင်းတိုင်တွေ သက်စေ့ထွန်းပြီး လှူထားတာဟာ မီးပူဇော်တာနဲ့ မတူဘဲ နေ့ခင်းကြောင်တောင် ဘုရားကို မီးတိုက်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မီးအပူခံကြည့်ဖို့တောင် လိုနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ဘုရားပျောက်နေကြတယ်လို့ တစ်ချို့က ပြောကြတာ ဖြစ်မှာပါ။
ဟုတ်သင့်သလောက်လည်း ဟုတ်နေပါတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားသွားပြီး ဘုရားစေတီမှာ ဌပနာထားတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဆံတော်ဓာတ်တော်ကို အာရုံပြု၊ ဘုရားဂုဏ်ကို နှလုံးသားမှာတည်ကာ ဘုရားရှိခိုး ပူဇော်ရမယ့်အစား ဂြိုဟ်တိုင်သွားပြီး ရေလောင်း၊ မီးတိုက်နေကြတော့ ဘုရားသွားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပျောက်ကာ ဘုရားသွားပြီး ဘုရားမမြင်ကြတဲ့ သူတွေလို့ ပြောစရာ ဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်။ ဘုရားသွားဖူးတာ မဟုတ်ဘဲ ဘုရားကို အလည်သွားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဖြစ်သင့်တာက ဘုရားစေတီ သွားရင်လည်း သင့်လျော်တိတ်ဆိတ်တဲ့ နေရာတစ်ခုကို ရွေးချယ်၊ ဘုရားရုပ်ပွားတော် ဒါမှမဟုတ် စေတီတော်ကို မှန်းကာ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေ လွှမ်းခြံပြီး ဂုဏ်တော်ပွားတာ၊ မေတ္တာပို့တာ၊ တရားထိုင်တာတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဘုရားကို ရေပူဇော်ချင်တယ်၊ မီးပူဇော်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အပူအအေးမျှတဲ့အခါ၊ အမှောင်ရှိတဲ့အခါမျိုးမှာ သက်တော်ထင်ရှား ဘုရားရှင်ကို ရေသပ်ပယ်ပေးနေသလို၊ ညအမှောင်မှာ ဘုရားရှင်ကို အလင်းဓာတ်နဲ့ ပူဇော်သလို၊ အနံ့အသက်ကောင်းအောင် အမွေးတိုင်နဲ့ ပူဇော်သလို စေတနာအပြည့်နဲ့ ရိုရိုသေသေ လေးလေးစားစား ပြုစုပူဇော်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ဘုရားသွားခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပြီး ဂြိုဟ်တိုင်များက ခွါနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘုန်းဘုန်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာများအနေနဲ့ ဘာသာရေးကို လောကီရေးတွေနဲ့ မရောယှက်ရအောင် လောကီဆရာတွေ အလိုကျ လုပ်မိနေတတ်တဲ့ “ဘုရားအကြောင်းပြကာ ဂြိုဟ်တိုင်များမှာ သွားပြီး စောစောစီးစီး ဆောင်းတွင်းကြီးမှာ ဆင်းတုတော်ကို ရေလောင်းတာတို့၊ နေ့လယ်နေ့ခင်း ဘုရားရှင်ကို မီးတိုက်တာတို့ မလုပ်ကြဘဲ ပုံတော်ကိုမှန်း ဂုဏ်တော်လွှမ်းကာ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကို အပူအအေးကင်းတဲ့ အချိန်မှာ သေသေချာချာ ကျကျနန ရေသပ္ပါယ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ အမှောင်ကိုခွင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ မီးထွန်းပူဇော်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုခြင်းဖြင့်သာ ဂြိုဟ်တိုင်များက ခွါပြီး ဘုရားသွားခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အပြည့်အ၀ သက်ရောက်အောင်သာ ကြိုးစားလုပ်ဆောင် သင့်ပါကြောင်း” အလွဲလေးများကို ထောက်ပြရင်း အမှန်းလမ်းကို ကောက်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ ဘုရားပုံများ၊ ပန်းချီကားချပ်များန...
နဲနဲလေးတော့ လွဲနေတယ် (၂)...
နဲနဲလေးတော့ လွဲနေတယ် (၁)...